ပထမအကြိမ်မြောက် အလှူပွဲအတွက် ဆွေးနွေးရအောင် [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > ကြော်ငြာချက်များ > အသိပေးချက်များ > ပထမအကြိမ်မြောက် အလှူပွဲအတွက် ဆွေးနွေးရအောင်
View Full Version : ပထမအကြိမ်မြောက် အလှူပွဲအတွက် ဆွေးနွေးရအောင်
ဖို၇မ်အတွက် အလှူလေးတစ်ခု လုပ်ကြမယ်လို့ အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစားခဲ့တာ ကိုရေခါးတို့ မောင်ဆန်းတို့ ရှိကတည်းကဆိုတာ အကုန်လုံးလဲ သိကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အထမြောက် အောင်မြင်အောင် ကျမ မစွမ်းဆောင် ပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ ကျမမှာ အကြွေးတစ်ခု တင်နေသလို အမြဲ ခံစားနေခဲ့ရတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကျမ အောင်မြင်အောင် လုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။
ကျမ ဖိုရမ်အတွက် ပျက်ကွက်တာတွေ များနေတော့ အကြွေးတစ်ခု ကျေအောင် ဆပ်ရတော့မယ်။
ကဲ ... ကျမတို့ ဖိုရမ်အတွက် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် အလှူပွဲအတွက် ဘယ်သူမှ မပေးပဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် Organizer ရာထူးယူလိုက်တော့မယ်။
ကျမလှူမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ နေရာလေးက HIV ကူးစက်ခံမိဘမဲ့ကလေးငယ်များရဲ့သုခရိပ်မြုံလေးပါပဲ..။
ကံကြမ္မာချထားပေးရာထိတ်လန့်စရာဘ၀တွေနဲ့ ကိုယ့်အနာဂါတ်ကိုမသိရှာကြတဲ့ ကလေးလေးတွေ. အသက်တစ်နှစ်ကနေ တစ်ဆယ့်ငါးနှစ်အထိ ၄၅ ယောက်လောက် ရှိပါတယ်။
သူတို့ဟာ ဘယ်လိုမှ ဆက်စပ်စရာမရှိတဲ့ တစ်နေရာစီကနေ ရောက်လာကြရပြီး တစိမ်းတရံစာတွေရဲ့မေတ္တာလေးနဲ့နွေးထွေးနေကြရရှာသူတွေဖြစ်ပါတယ်.။
သူတို့လေးတွေကို သုခရိပ်မြုံလေးမှာပဲ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းလေးတွေနဲ့ စာတွေသင်ပေးတယ်.. လိုအပ်တဲ့ ဆေးဝါးတွေ တိုက်ကျွေးလို့ တာဝန်ရှိတဲ့ လူတွေက အလှည့်ကျ ပြုစု နေကြပါတယ်။ ရေများရာမှာ မိုးရွာမယ့်အစား၊ မိဘမေတ္တာ ငတ်မွတ်လို့ အနာဂတ် မရေမရာ ဖြစ်နေတဲ့ ခလေးလေးတွေကို တစ်နာရီဖြစ်ဖြစ် တစ်နေ့တာ ဖြစ်ဖြစ် သူတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်လေးတွေကို ကျမ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားကြ၇အောင်။
ကျမရွေးထားတဲ့ နေရာလေး အဆင်ပြေမပြေ ကောင်း၏ မကောင်း၏ အမြင်လေးတွေ သိချင်ပါတယ်။
ဒီ့ထက် ပိုကောင်းတဲ့ နေရာ ရှိရင်လည်း ကျမတို့ ထပ်စဉ်းစားတာပေါ့။
ရန်ကုန်ရောက်ရင် ကျမအဓိက တွေ့ဖြစ်မယ့် သူတွေက မိုးပြေးလေး၊ နေညို၊ ဟိန်းလေး ခုနောက်တစ်ထပ်တစ်ယောက်ေ၀၀ါး
ဒေါက်တာ ဖြိုးဝေလင်းကတော့ တာဝန်ကျနေတယ် ပြောတာပဲ။
ဒါက ကျမလက်လှမ်းမှီသလောက် လူတွေပါ။
ကျန်တဲ့ ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမှန်းမသိတဲ့ မန်ဘာတွေ နီးစပ်ရာ ဆက်သွယ်ပေးကြပါနော်။
အလှူအတွက် တူတူတိုင်ပင် ဆောင်ရွက်ကြရအောင်။
အသေးစိတ် အချက်အလက်... အသေးစိတ်အစီအစဉ် ကို ရန်ကုန်က မန်ဘာတွေနဲ့ တွေ့ပီး အသေးစိတ် တိုင်ပင် စုံစမ်းပီးတဲ့အခါ
ကဲ ကျမတို့ဖို၇မ်ရဲ့ ပထမအကြိမ် အလှူပွဲကြီး စတင်ကြရအောင်။
( ကန့်ကွက်လိုတဲ့သူ ရှိရင်လည်း လွတ်လပ်စွာ ရေးသားနိုင်ပါတယ် နော်)
ကျွန်တော် လဲ တက်နိုင်သလောက်လှူချင်ပါတယ် လှူမယ် ဆိုရင်တော့ pm ပို့ပြီး ဆက်သွယ်ပေးပါနော်
လိုအပ်တာ ရှိရင်လဲ ပြောပါ ခင်ဗျာ တက်နိုင်ရင် ကူညီပေးပါ့မယ် ....
အခုလို စိတ်ရောကိုယ်ပါ အင်အားစိုက်ထုတ်ပြီးလုပ်ပေးကြမယ့် KPZ ၊ မိုးပြေးလေး၊ နေညို၊ ဟိန်းလေး ၊ေ၀၀ါး တို့ကိုလဲ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒေါက်တာ ဖြိုးဝေလင်းကိုလဲ ခေါ်တော့ ခေါ်ကြည့်ကြအုံးပေါ့ ။ သူ အဆင်ပြေရင် လာနိုင်အောင်လို့ ။
တခြား ဖိုရမ်ထဲက စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ မန်ဘာတွေ ကိုအားလုံးကိုလဲ ဖိတ်လိုက်နော် ... ။
ကိုရေခါး တို့ .. ကိုမောင်ဆန်းတို့ ရော ရန်ကုန်မှာရှိကြလားမသိဘူး ။ ရှိကြရင်တော့ ... တပျော်တပါးကြီးပေါ့ ... :haha: ။
ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ခွင့်မရတာလေးကိုတော့ နဲနဲစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ် .. :( ။
ဒါပေမယ့် MEF မန်ဘာအားလုံး ကိုယ်စားတော့ အလှူကလေးအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်သွားမှာကို ကြိုတင်စဉ်းစားမိရင်း ၀မ်းသာဂုဏ်ကြည်နူးမိပါတယ်။
မြန်မာပြည်က MEF မန်ဘာအားလုံး အပါအ၀င် အမှတ်တရဓါတ်ပုံတွေ အများကြီးရိုက်ပြီးတင်ပေးအုံးနော် .... :7:
ဗွီဒီယိုလေးပါ ရိုက်လို့ရရင် ရိုက်ယူလာခဲ့ပါဗျာ ... :7:
အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ..ပထမဆုံး မKPZ ကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ကြောင်းပြောပါရစေ..လှူရမယ့်နေရာလေး ရွေးတတ်လွန်းလို့ပါ..အဓိကလိုက်ကူညီကြမယ့် မမိုးပြေးလေး၊ နေညို၊ ဟိန်းလေး ၊ေ၀၀ါး တို့ကိုလဲ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်...အလှူလေးကို ရင်ထဲမှာကြိုတင်မြင်ယောင်စိတ်ကူးမိလိုက်တာနဲ့တောင် ကျေနပ်ကြည်နူးမှုတွေအများကြီး ရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်..ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပါပြီး ကုသိုလ်မယူနိုင်တာတောင် အရမ်းကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်..အလှူငွေလေးပဲထည့်လိုက်ရတာတောင် အားမရပါဘူးဗျာ..တစ်ကယ်ရင်ထဲက ပြောတာပါ..ကျွန်တော်က အဲဒီလိုအလှူပွဲ ကုသိုလ်ပွဲမျိုးဆိုရင် လုပ်အားနဲ့ ကုသိုလ်ယူပြီး ကူညီရတာကို ပိုသဘောကျတတ်တဲ့ သူမျိုးပါ..ဒီတစ်ကြိမ် လုပ်အားကုသိုလ်ယူခွင့် မရလိုက်ပေမယ့် နောက်တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ လိုက်ပါကုသိုလ်ယူဖြစ်အောင် ယူပါဥိးမယ်ခင်ဗျာ..အခုတော့ ကိုချစ်သီး ပြောသလို မှတ်တမ်းတင်တာလေးတွေ ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါလို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်..ကျွန်တော်တို့လဲ ပြန်ကြည့်ပြီး ကြည်နူးရအောင်လို့ပါ..ကူညီဖို့လွယ်ကူအဆင်ပြေမယ့် ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်များလဲ လိုက်ပါကူညီကုသိုလ်ယူပေးကြဖို့ ကျွန်တော်ကလဲ ထပ်မံမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်...
ဟုတ်ကဲ့ပါ အမှတ်တရအလှုဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပေးလိုက်ပါ့မယ် အမkpz ရေ ကင်မရာကောင်းကောင်းလေးသာယူလာခဲ့နော် နောက်ထပ်ပါဝင်ကူညီနိုင်မယ့်လူများကိုလည်းဒီနေရာမှထပ်မံဖိတ်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ငွေအား(သို့)လူအား
ပါဝင်ကူညီကြတဲ့အကိုအမတွေကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားပါရစေခင်ဗျာ ဖိုရမ်အလှုပွဲလေးဖြစ်မြောက်သွားအောင် အတတ်နိုင်ဆုံးကူညီပေးသွားမှာပါခင်ဗျာ အားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
အလှုအတွက်ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင် ရုံးဖွင့်ရက် ရုံးဖွင့်ချိန်အတွင်း သူရအောင် 095002684 ကိုဆက်သွယ်လှုဒါန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ စနေတနင်္ဂနွေဆိုရင်တော့ 095012842 သို့ဆက်သွယ်လှုဒါန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ပထမအကြိမ်ဖိုရမ်အလှုပွဲကြီးမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ဆောင်ရွက်ရအောင်လားဗျာ ဘဏ်မှဆက်သွယ်လှုဒါန်းချင်သူများအနေဖြင့် မှတ်ပုံတင်နံပါတ် 14/THAPANA(N)089164 ပါခင်ဗျာ အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာ
အမနေညိုရေ အမလုပ်တာနဲ့ကျွန်တော် နာမည်တွေရော ဖုန်းနံပါတ်တွေရော ပိုဆိုးတာက မှတ်ပုတင်တောင်ပါသွားသေးတယ်နော် :4: :4: ဒီဖိုရမ်မှာကျွန်တော့်လောက်ဘယ်သူမှဖော်ပြခြင်းမခံရဘူး ( နာမည်ဆိုးနဲ့နော် ရုတ်ရုတ်လုပ်မယ်တော့ကြံလို့မရဘူး မှတ်ပုံတင်နဲ့ရဲစခန်းတိုင်လိုက်ရင်ကွိပြီ :(( ကျွန်တေ်ာတော့ဘယ်ကောင်မလေးမှကြူလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော :angry: :angry: အမနေညိုရေ နေပြည်တော်ကပြန်လာရင် မုန့်ဝယ်လာခဲ့
ဖိုရမ်အလှူအတွက် အခုလို ဦးစီး ဦးဆောင် ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပြောပါရစေ ...
ဖိုရမ်အနေနဲ့ အလှူတစ်ခုလုပ်ချင်နေတာ တော်တော်လေးကြာနေပါပြီး ။
အခုလို တက်တက်ကြွကြွနဲ့ ဦးဆောင်လုပ်နိုင်ပေးမဲ့သူ မရှိလို့ မဖြစ်မြောက်သေးတာပါ ။
အခုတော့ ဖိုရမ်အလှူတကယ်ဖြစ်မြောက်တော့မှာပါ ။
မ KPZ တင်ပြထားတဲ့ အလှူကိစ္စနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကျွန်တော့်အနေနဲ့လဲ ကျေနပ်သဘောတူပါတယ်ခင်ဗျာ ..
လှူမဲ့နေရာရော ၊ လှူဖွယ်ပစ္စည်းတွေကိုပါ သဘောကျ ကျေနပ်ပါတယ် ။
လှူမဲ့ရက်နဲ့ က နည်းနည်းလိုသေးတော့ ဖိုရမ်အတွင်းမှာ လှူဒါန်းမဲ့အသင်းဝင်များရှိရင် ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ..
ကျွန်တော်လဲ တတ်နိုင်သလောက် ပါဝင်လှူဒါန်းသွားမှာပါ ..
သို့ဖြစ်ပါ၍ HIV ကူးစက်ခံမိဘမဲ့ကလေးငယ်များရဲ့သုခရိပ်မြုံလေး ကို ဖိုရမ်မောင်နှမများအနေနဲ့ တတ်နိုင်သလောက် ပါဝင်ကုသိုလ်ယူကျပါရန် နိုးဆော်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ..
နောက်နောင်ဘ၀များမှာလဲ ရေစက်တူတူဆုံကျတာပေါ့ဗျာ :)
ဖိုရမ်မောင်နှမများ အလှူငွေထည့်ချင်ပါက ထည့်ရမဲ့ လိပ်စာလေးတွေဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာ ....
စင်္ကာပူမှ လှူဒါန်းချင်သူများအတွက် မKPZ ထံ တိုက်ရိုက်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ် ။
ုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကတော့ အလှူငွေထည့်ရမဲ့ လိပ်စာအတိအကျကို မကြာမီဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။
မော်စကိုမြို့မှာ ရှိတဲ့ ညီအစ်ကိုတွေအတွက် ကျွန်တော့်မှတဆင့် လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ..
mail : phoelapyae@myanmarengineer.org
ph : +7929 676 7359
MEPhI Hostel , Moscow
ယနေ့မှစ၍ လှူဒါန်းရရှိငွေ အသေးစိတ်ကို ဒီနေရာလေးမှာ နေ့စဉ် update လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ...
ဖိုရမ်မောင်နှမများအနေနဲ့ အလှူမှာ တစ်တက်တစ်အားပါဝင် လှူဒါန်းကျပါစို့လို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ..
ကောင်းတယ်ဗျို့.... အဲ့ဒီနေရာလေးကို ကျနော်ကြားသာကြားဖူးပြီး သေချာတော့မသိခဲ့ဘူးဗျ .. စိတ်ဝင်စားနေတာကြာပြီ ... ။ အခု အဲ့ဒီမှာလှူမယ်ဆိုတော့ ကြားရတာဝမ်းသာသဗျာ .... ။ ကြားရကြားရ နားဝမှာ ချို လှသဗျို့  ။ ကျနော်လဲ အခုလောလောဆယ်တော့ ရန်ကုန် (မှော်ဘီ) မှာရှိနေတယ် ... တာဝန်တွေကြောင့် မအားတောင်မှ နိုင်တာလေးလုပ်ပေးလို့ ရခဲ့ရင် လုပ်ပေးပါ့မယ် ။ မြစ်တစ်စင်းမဟုတ်တောင်မှ မိုးရေတစ်ပေါက်လောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ .... :)
ဟေ့ကောင် ဇင်မောင်ထွန်း ... မင်းလဲလာခဲ့ဟေ့ကောင် .... :4:
HIV ကူးစက်ခံမိဘမဲ့ကလေးငယ်များရဲ့သုခရိပ်မြုံလေးမှာ အလှူကို လုပ်မယ်လို့ အားလုံးက သဘောတူလိုက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်...
ပထမအကြိမ်မြောက် အလှူပွဲလေးကို အတူ ပါဝင်ချင်ပေမယ့် မပါဝင်နိုင်လို့ စိတ်မကောင်းဖူး... တစ်ဖက်မှာ အားလုံးက တက်တက်ကြွကြွနဲ့ ပါဝင်ဖို့ လုပ်ဆောင်နေတာတွေ့တော့ အရမ်းကို ၀မ်းသားမိပါတယ်....
မိုးပြေးလေး၊ နေညို၊ ဟိန်းလေး တို့နဲ့ ထပ်ဆုံချင်သေးရုံသာ မကပဲ တခြား တခြားသော သူတွေနဲ့လည်း ဆုံချင်ပါသေးရဲ့... ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဘာဆိုဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်လို့တော့ စိတ်မကောင်းပါဖူး... ဒီတော့ ကိုယ် ဘာကို လုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတာကို စဉ်းစားနေမိပါတယ်...
Shout Box မှာ
(20:31:11) KPZ: ဖိုရမ် အလှူပွဲအတွက် သွေးအေးနေသေးသလိုပဲ
(22:33:36) ထင်လင်း: သတိမထားမိကြ​သေးလို့ပါဗျာ ... :D:D
လို့ ရေးထားတာမြင်တော့ ဒီနေ့မှ စတင်တာဆိုတော့ သိပ်သတိမထားမိကြသေးတာလို့လည်း ထင်မိပါတယ်...
ဒီတော့ ကျွန်တော်အနေနဲ့ အားလုံးက အလှူလုပ်ဖို့ သဘောတူထားကြတဲ့ သုခရိပ်မြုံလေးအကြောင်းကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါရဲ့.....
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဒီ ဂေဟာလေးအကြောင်းကို ဂဃဂဏ မသိတော့ မအိန္ဒြာရဲ့ blog လေးကနေ link လေးယူပြီး မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်....
ဒီလို စိတ်ကူးမိတာကလည်း blogspot ဆိုတာက တစ်ချို့နေရာတွေကနေ ၀င်လို့မရတော့ ၀င်မကြည့်ဖြစ်တဲ့ မောင်နှမတွေအနေနဲ့ ဒီ ဂေဟာလေး အကြောင်းကိုသိထားရအောင်ပါ....
ဒါကတော့ မအိန္ဒြာရဲ့ blog လေးကနေ ကူးယူထားတဲ့ သုခရိပ်မြုံရဲ့ အကြောင်းလေးပါ....
အခုမြင်တွေ့ရတဲ့ အဆောက်အဦးလေး ကတော့ HIV ကူးစက်ခံ မိဘမဲ့ကလေးငယ်များရဲ့ သုခရိပ်မြုံလေး ပါပဲ..။
သုခရိပ်မြုံဂေဟာ လေးက ဒဂုံ မြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း မှာ တည်ရှိပါတယ်.။
အဲဒီ့အဆောက်အဦးလေးကို ၂၀၀၆ခုနှစ်မှာအုတ်မြစ်ချအခြေတည်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၊ သုခရိပ်မြုံစတင်စဉ်မှာ ကလေးလေး(၂)ယောက်ကနေစတင်ခဲ့တာပါ..။
အခု အဲဒီ့အဆောက်အဦးထဲမှာ ကလေးလေး(၄၅)ယောက် အထိရှိသွားခဲ့ပါပြီ.။သူတို့လေးတွေဟာ အသက် တစ်နှစ်ခွဲ ကနေ ၁၅ နှစ်အထိ အရွယ် အသီးသီးရှိကြပါတယ်.။
ကံကြမ္မာချထားပေးရာထိတ်လန့်စရာဘ၀တွေနဲ့ ကိုယ့်အနာဂါတ်ကိုမသိရှာကြတဲ့ ကလေးလေးတွေ.သူတို့ဟာဘယ်လိုမှဆက်စပ်စရာမရှိတဲ့တစ်နေရာစီကနေရောက်လာကြရပြီး တစိမ်းတရံစာတွေရဲ့မေတ္တာလေးနဲ့နွေးထွေးနေကြရရှာသူတွေဖြစ်ပါတယ်.။
သူတို့လေးတွေက အဲဒီ့ဂေဟာလေးမှာ ဆရာမဒေါ်သန်းမြင့်အောင်၊ ဆရာမ ဂျူး၊ ဆရာမစုထား အစရှိတဲ့ သုခရိပ်မြုံမိသားစုရဲ့အရိပ်အာဝါသအောက် မှာ ၀န်ထမ်းသူနာပြုဆရာမ၊ကျောင်းဆရာမမေမေတွေ (၁၈) ယောက်ရဲ့ ယုယအုပ်ထိမ်းမှုအောက်မှာ
အပူအပင်မရှိ ပျော်ရွှင်နေကြရှာပါတယ်..။ မူကြိုအရွယ်ကလေးတွေအတွက် မူကြိုကျောင်း နဲ့ သူငယ်တန်းကနေ လေးတန်းအထိ ကလေးငယ်တွေအတွက် ၀ိသာခါသီလရှင်ပညာဒါနကျောင်းမှာ နာမည်စာရင်းပေးသွင်းထားပြီး သုခရိပ်မြုံလေးမှာပဲ သင်ရိုးတွေအတိုင်းသင်ကြားပေးလျှက်ရှိပါတယ်.။ လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးများ ပုံမှန်တိုက်ကျွေးပြီး အလှည့်ကျဆရာဝန်များ ၀န်ထမ်းသူနာပြုများနဲ့ သူတို့ဘ၀လေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနေကြပါတယ်..။ ခုချိန်အထိ ကလေး(၂)ယောက် တိမ်းပါးလက်လွှတ်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်..။
သူတို့ဘ၀လေးတွေရဲ့ လိုနေသမျှ ရုပ်ကွက်လပ်၊ စိတ်ကွက်လပ်တွေကို အကုန်လုံးမပြည့်စွမ်းနိုင်ရင်တောင် မေတ္တာရှင်တွေက ကရုဏာရှေ့ထားလှူဒါန်းကြတာလေးတွေနဲ့ ထပ်တူနီးပါး ဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်အောင်ကြိုးစား နေကြပါတယ်.။
သူတို့လေးတွေ ပစ္စပ္ဂုန်အတွက် ၊ သူတို့လေးတွေရဲ့အနာဂါတ်အတွက် အလှူငွေတွေ ပံ့ပိုးမှုတွေ လိုအပ် နေပါတယ်.။ သုခရိပ်မြုံရဲ့ဦးဆောင်ဦးရွက်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဆရာမဒေါ်သန်းမြင့်အောင် က
&quot; ကလေးလေးတွေ အတွက် မိဘသဖွယ်မေတ္တာ ပေးနိုင်မယ့်သူတွေရဲ့ စေတနာတွေနဲ့ သူတို့ လေးတွေရှင်သန်နေကြပါတယ်..။ သုခရိပ်မြုံမိသားစုနဲ့ ကရုဏါရှင်တွေရဲ့ မေတ္တာရိပ်အောက်မှာ ကလေးလေးတွေ
ကလေးသူငယ်များရဲ့ အခွင့်အရေး ကို အပြည့်အ၀ ခံစားနေနိုင်ကြပါတယ်.. အခုလှူဒါန်းကြတဲ့ အလှူရှင်များအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ် &quot; လို့် ဒီအစီအစဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ၀မ်းပန်းတသာ စကားကြုံပါးပြောကြားခဲ့ပါတယ်.။
၁ နှစ် အရွယ် ကလေးငယ် ၃ ယောက် …
မူကြိုအရွယ် ကလေးငယ် ၂နှစ်မှ ၅နှစ်ကြား ၁၀ယောက်
၅ နှစ်ကလေး ၈ ယောက်
၅ နှစ် ကနေ ၁၀ ကြား ကလေး ၁၆ ယောက်
၁၀ နှစ်အထက် ၈ ယောက်
ကလေးငယ်များအတွက် အဓိက လိုအပ်ချက်မှာ…အစားအစာ နဲ့ ဆေးဝါး.. ဖြစ်ပါတယ်…အစားအစာအနေနဲ့ ကလေးငယ်များအား တစ်နေ့ ခြောက်ကြိမ် ကျွေးမွေးပါတယ်…
ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့ အစားအစာ ကိုယ်ခံစွမ်းအားတွေ သန်မာလာစေနိုင်မယ့် အစားအစာတွေကို စနစ်တကျ ကျွေးမွေးရတယ်လို့သိရပါတယ်..။
နံနက်စာကို မနက် ၇ နာရီတွင် ကျွေးမွေးပြီး… ပဲပြုတ်ထမင်း၊ ခေါက်ဆွဲပြုတ်နဲ့ … ဗိုက်ပြည့်စေမယ့် အခြားအမယ်များပါကျွေးမွေးပါတယ်..။
နံနက် ကိုးနာရီအချိန်တွင် .. အဆာပြေ နွားနို့ ဘီစကစ် နံနက် ၁၁ နာရီနဲ့ ၁၂ အချိန်တွင် နေ့လည်စာ ထမင်း နေ့လည် ၂ နာရီ အချိန်မှာ အဆာပြေ အိုဗာတင်းနဲ့ ဘီစကစ် ညနေ ၅ နာရီအချိန်တွင် ညနေစာ ကျွေးမွေးပါတယ်…။
ည အဆာပြေကို ည ၈ နာရီအချိန်တွင် ကြက်ဥ၊ နွားနို့ တို့ ထပ်မံကျွေးမွေးပါတယ်…။
ကလေး(၄၅)ယောက်စာတစ်နေ့ကို စားစရိတ် ငွေ ကျပ် ၅၀၀၀၀ ကနေ ကျပ်၆၅၀၀၀ ၀န်းကျင်အထိကုန်ကျပြီး ဆေးဝါးအနေနဲ့ကတော့ ကုထုံးဆေးဝါးများအပြင် အားဆေးအဖြစ် Multivita နဲ့ ပရိုဗီမင် အားဆေးတွေကို တိုက်ကျွေးတယ်လို့သိရပါတယ်.။
လက်ရှိအဆောက်အဦနဲ့မြေနေရာကကျဉ်းမျောင်းနေပြီး.အဆောက်အဦတိုးချဲ့ဖို့လည်း လိုအပ်နေပါတယ်.။ကလေးလေးတွေ ကစားကွင်းသေးသေးလေးလဲလိုအပ်နေပါတယ်.။
နောက် လက်ရှိကလေးလေးတွေ အရွယ်ရောက်လာတဲ့ အခါ မိန်းကလေး ယောက်ျားလေး သီးသန့် GROUP HOME ပုံစံထားပေးနိုင်ဖို့အတွက် မြေကွက်တစ်ကွက်ဝယ်ပြီး အဆောက်အဦဆောက်ဖို့
အစီအစဉ် ရှိတယ်လို့ ဆရာမစုထားက ပြောပြပါတယ်။ သူတို့လေးတွေ အတန်းပညာဆက်သင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် သူတို့ရောက်နိုင်တဲ့ ပညာအဆင့်အတန်း အထိပြီးမြောက်အောင် ၊
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာတွေတတ်ချင်သူတွေအတွက် ၀ါသနာပါရာလက်မှုပညာတွေ ကိုယ်စီကိုယ်ငှ တတ်မြောက်အောင်၊ လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးလူလောကထဲမှာတင့်တောင့်တင့်တယ်အခြေချနိုင်သည်အထိ
ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်း ကြည်နူး ၀မ်းသာဖွယ်ရာကြားသိရပါတယ်.။
ပထမအကြိမ်မြောက် အလှူပွဲလေး အကြောင်းကို ကျွန်တော်လည်း ကို chit tee တို့လို.... အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံများစွာကို ကြည့်ရှုဖို့ပဲ ရင်ခုန်နေမိပါတယ်.... :)
အခုရာသီက အလုပ်ရှုပ်နေလို.ပါ။ ဆြာဖေရေ အလုပ်ပြီးရင်၊အေးဆေးဖြစ်ရင် ကျုပ် အပြေးလေး လာခဲ့ပါ့မယ် ........ ဒက်ကလောက်......ဒက်ကလောက်
အလှူလုပ်မဲ့ စိတ်ကူးရော အလှူလုပ်မဲ့နေရာရော အင်မတန် ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း အခု ရန်ကုန်ရောက်နေတုန်း အတော်ပဲ ဖြစ်သွားတယ်။ တတ်နိုင်သမျှ ကူညီပေးပါ့မယ်။
အေး ... ရန်ကုန်ရောက်နေရင် အကို့ဖို့ပါ ထည့်လှူလိုက်ကွ ... :P :P :D
အလကားစတာပါ ... ဒီနေရာလေးကို ရွေးချယ်လိုက်တာ အလွန်ကောင်းတဲ့ စိတ်ကူးပါပဲ ...
ကျနော်လဲ ကိုယ်တိုင် မပါဝင်နိုင်တာ အထူး ဝမ်းနည်းမိပါတယ် ...
ရန်ကုန်က လှူရမယ့်နေရာ ... လှူမယ့်နေ့ရက် အတိအကျ ပြောပါ ... နေညို့ကို ဆက်သွယ်ရင် ရမလားပဲ
ကျနော် အလှူငွေထည့်ဖို့ စီစဉ်ပါ့မယ်
ရန်ကုန်က မန်ဘာတွေအတွက် အလှူငွေ ထည့်ဝင်နိုင်မဲ့နေရာကို ဒီလိုလေး စီစဉ်ချင်ပါတယ်။
နေညို က ဒီရက်ပိုင်း နေပြည်တော်ကို ၄ ရက်လောက် ခရီးသွားဖို့ရှိနေတော့ မောင်လေးေ၀၀ါး ကိုလွဲခဲ့ပါမယ်။
ဒီရက်ပိုင်းလှူချင်ရင်တော့ မောင်လေးေ၀၀ါးကို ဆက်သွယ်လှူဒါန်းစေချင်ပါတယ်။
နေရာကတော့ ဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် အရင်ဆက်သွယ်ပြီးမှဆိုရင်ပိုပြီးအဆင်ပြေမလားလို့ပါ။
ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အိမ်မှာ အမြဲတစေ မရှိတာရယ်၊ ခရီးဝေးတာရယ်တာကြောင့်ပါ။
ေ၀၀ါး နဲ့ နေညို ကိုဖုန်းပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ PM ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်
မောင်လေးေ၀၀ါး ကိုဆက်သွယ်ချင်ရင်တော့ ( မောင်သူရအောင် လို့ခေါ်ပါတဲ့) :4:
(ရုံးဖွင့်ရက် ရုံးချိန်အတွင်း09502684ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် နောက်စနေတနင်္ဂနွေဆိုရင်တော့ 095012842 ကိုဆက်သွယ်ပါလို့) ဘဏ်မှလွဲချင်သူများအတွက်ကတော့ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်က 14/THAPANA(N)089164 ပါ ။
နေညို ကတော့ 13/TaKaNa (N) 151851 ပါ။
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း မောင်လေးေ၀၀ါးဆီ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနို်င်ပါတယ်။
အကြံပြုစရာ၊ ကူညီနိုင်တာများရှိရင် လာရောက်ရေးသားကြပါဦး။
ပိုပြီးအဆင်ပြေနိုင်မဲ့နည်းလမ်းကို မKPZ တို့နဲ့ညှိနိုင်းပြီး ပြန်လည်ဖေါ်ပြပေးပါ့မယ်။
အားလုံးရဲ့ အကြံဥာဏ်ကော ၊ လူအင်အားကော လိုချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးနေညိုနဲ့ဆက်သွယ်ပေးကြပါ။
နေညို 19/20/22 နေပြည်တော်မှာ ရှိပါမယ်။ နေပြည်တော်ကမန်ဘာများကိုလည်း ဆက်သွယ်ချင်ပါတယ်။
လှူမဲ့ရက်ကဘယ်တော့လဲမသိဘူး.. :?. ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ရက်ဆိုသိပ်ကောင်းမှာပဲ...မ KPZ ရေ ဘယ်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီး ဘယ်လိုဆက်သွယ်လှူဒါန်းရမယ်ဆိုတာလေးပြောပေးပါဦး....
တတ်နိုင်သလောက် ပါဝင်လှူဒါန်းချင်လို့ပါ... :)
ကိုHH or မ HH
ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ နေညို နဲ့ မောင်လေးေ၀၀ါးဆီဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
အလှူရက်ကို အကြမ်းဖျင်းတော့ မ KPZ က 1.1.2010 လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
အသေးစိတ် အစီအစဉ်ကိုတော့ ခဏလောက်စောင့်ပေးကြပါလို့။
မ HHပါ....HHဆိုလဲရပါတယ် မနေညိုရေ(မနေညိုဟုတ်ပါတယ်နော်. :P)...ဖြေကြားပေးတာကျေးဇူးပါ....(မသေချာရင် ကို တို့ မ တို့ မထည့်တော့ဝူး.. :(..johnmoeeain ကိုမှားပြီး ကို johnmoeeain လုပ်မိလို့ မုန့်ဝယ်ကျွေးပါ့မယ်လို့ချော့ထားရတယ်... :4:) ဖြစ်နိုင်ရင် မ KPZ မပြန်ခင်လှူလိုက်ချင်တယ်လေ..၂၀ရက်နေ့ပြန်မှာဆိုလား..ဖတ်လိုက်ရတယ်..မ KPZ ကိုဘယ်လိုဆက်သွယ်ရပါ့...
ရန်ကုန်က အလှူရှင်တွေအတွက် နေညို စီစဉ်ထားတာ အရမ်း အဆင်ပြေပါတယ်။ မောင်လေးေ၀၀ါးကိုသာ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းထားကြပါ။
ကျမရန်ကုန်ကို ၁၉-၁၂-၁၉၈၂ မြန်မာပြည် စံတော်ချိန် ၂ နာရီဆို ရောက်ပါပီ။
အဲဒီ့အချိန်ကစပြီး ၀၉ ၅၄၀၅၅၃၇ ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါပီ။
လှူမယ့်နေရာ အချိန်ကိုတော့ ကျမကိုယ်တိုင် အဲဒီ့နေရာကို သွားရောက်စုံစမ်းပီးတဲ့ အခါ အတည်ပြုပေးပါမယ်။
ရန်ကုန်မှာ ငွေအားလူအား ပါဝင်ချင်တဲ့ အမာခံ မန်ဘာတွေအားလုံးကိုအလှူမတိုင်ခင် တစ်ရက် တစ်ပေါင်းတစည်းတည်း တွေ့ကြဖို့ ကျမ စီစဉ်ပေးပမယ်။
ရက်အတိအကျ မပြောနိုင်သေးတာက ကျမရန်ကုန်ရောက်ပီး အမေ့နားမှာတော့ သူကျေနပ်အောင် ခဏနေပေးရအုံးမှာမို့ပါ။ :((
အားလုံး နားလည်ပေးနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ တော်ကြာ သူ့ပြန်လာတွေ့တာလား ဖိုရမ် အလှူ ပြန်လာလုပ်တာလား ဖြစ်နေလို့ ကျမပြေးပေါက်မှားနေပါဦးမယ် :P
ဒါပေမယ့် သေချာတာတစ်ခုက နေညိုနဲ့ ဟိန်းလေး ရန်ကုန်ရောက်တာနဲ့ ကျမတို့ တစ်ရက်တွေ့ကြပါမယ်။ အဲဒီ့မတိုင်ခင်မှာ အလှူလုပ်မယ့်နေ့ကို ကျမ သေချာအောင် လုပ်ထားပမယ်။
စင်္ကာပူကလှူဒါန်းချင်သူများ ညီမလေး ဂျွန်မိုးအိမ်ကို ဆက်သွယ်လှူဒါန်းလိုက်ပါ။ သူက ဒီကအလှူငွေတွေကို စုစည်းပီး ကျမဆီကို ဆက်သွယ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
အလှူငွေ လှူဒါန်းမယ့်ရက်တော့ ဒီဇင်ဘာ ၂၅ရက် နောက်ဆုံးထား စေချင်ပါတယ်။
ကဲ ... အမာခံ မန်ဘာအပေါင်းတို့ရေ .. ရပ်ဝေးကလူတွေကလည်း စိတ်အား ငွေအား ရပ်နီးကလူတွေကလည်း ငွေအား လူအားတွေနဲ့ ကျမတို့ ဖိုရမ်ကြီးရဲ့
ပထမအကြိမ်မြောက် အလှူပွဲကြီးကို အောင်မြင်အောင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရအောင် . . . . .
(ကျမတို့ဖိုရမ်ရဲ့ အုတ်မြစ်ချသူ ကိုရေခါးတစ်ယောက် ၇န်ကုန်မြေမှာ ရှိနေလို့ ၀မ်းမြောက်ဖွယ် ကြားရတာပါပဲ )
ရပ်ဝေးရောက်နေသူတွေအတွက် ဓါတ်ပုံတွေ တစ်လှေကြီး မှတ်တမ်းတင်ခဲ့မယ်နော် စိတ်ချ :P
အလှူငွေ လှူဒါန်းမယ့်ရက်တော့ ဒီဇင်ဘာ ၂၅ရက် နောက်ဆုံးထား စေချင်ပါတယ်...
မ KPZ ပြောခဲ့သလိုပဲ.... အစ်မ မြန်မာပြည် ပြန်သွားတဲ့အချိန်ခဏအတွင်း အစ်မ ကိုယ်စား အလှူငွေ ကိစ္စတွေအတွက် ကျွန်တော် ခေတ္တ ခဏ တာဝန်ယူပေးမှာဖြစ်ပါတယ်...
ဒီအတွက် စင်္ကာပူမှ လှူဒါန်းချင်သူများအနေနဲ့ PM ပို့ပြီးသော်လည်းကောင်း၊၊ chat room မှ သော်လည်းကောင်း၊ mail ပို့ပြီးသော်လည်းကောင်း ကျွန်တော့်ဆီကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်....
အစ်မ ပြောခဲ့သလို ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့ အထိပေါ့..နော်... :) ဒီဇင်ဘာ 25 က သောကြာနေ့ဆိုတော့ ကျွန်တော့အနေနဲ့ ဒီဇင်ဘာ 26 ရက်နေ့မှာ အလှူငွေတွေကို စုစည်းပြီး မ KPZ ကို ဆက်သွယ်ပြီး လွဲပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်......
အမနေညိုက နေပြည်တော်မှာ ရှိတာတော့ဟုတ်ပါတယ်
ဘာလား ဆိုတာလေး ပြောပြဦးလေ ;)
ကျွန်တော်တို့ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် အမကို ကော်ကော်လာတိုက်မယ် :4:
နောက် အလှူငွေလဲ ပေးလိုက်ချင်လို့ပါ တစ်ခါတည်း အမနဲ့မတွေ့ဖြစ်ရင်တော့ ကိုေ၀၀ါးကြီးကိုပဲလွှဲလိုက်တော့မယ်
ကိုေ၀၀ါးရေ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်က နေလွှဲရင်ရမလားဗျို့ ;D
ကျွန်တော့်ဆီကို ပထမဆုံးဆက်သွယ်ပြီး အလှူငွေ ထည့်တာကတော့ ဦးလှမင်းမောင်-ဒေါင်္ံချိုချိုသင်း မိသားစု က ဖြစ်ပါတယ်..
S$100 တိတိ ကျွန်တော့်ဆီ online banking မှတဆင့် Transfer လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်....
ခုလိုလှူဒါန်းရသော အကျိုးကြောင့် ဦးလှမင်းမောင်-ဒေါင်္ံချိုချိုသင်း မိသားစု (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php?action=profile;u=6246) ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒ များပြည့်စုံပါစေလို့ MEF မှ မောင်နှမများအားလုံးကိုယ်စား ကျွန်တော်က ဒီနေရာလေးကနေ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်...
ဖိုရမ်ကတာဝန်ရှိသူများ နှင့် ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအားလုံးကို ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်
ညီမKPZရေ စိတ်ကူးအရမ်း ကောင်းပါတယ် ကျေးဇူးနော်
မနေညိုက နေပြည်တော် တိုက်အမှတ် 3372 ဘူးကွဲအိမ်ရာမှာပါ
ဟိန်းလေးက တိုက်အမှတ် 233 ကံ့ကော်အိမ်ရာ office Ph: 067-411423/411424/
Hostal Ph:067-414936 ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
ညီချီးဘူးလေးရေ အကို့ကိုမြန့်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ကနေလွဲရင်လည်းရပါတယ်ခင်ဗျာ အကိုကလမ်းမတော်မြို့နယ်မှာနေတာဆိုတော့ အဲဒီနဲ့နီးတဲ့ဘယ်ဘဏ်မဆိုလွဲလိုက်ရင်အကိုသွားထုတ်ထားလို့ရပါတယ်
နောက် ရန်ကုန်မြို့တွင်းလှုမယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တေ်ာလာယူပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တေ်ာ့ဆီကို ဖုန်းနံပါတ်လေးသာPM ပိုိ့ပေးလိုက်ပါ ကျွန်တေ်ာပြန်ဆက်သွယ်ပါ့မယ်ခင်ဗျာ
ကျွန်တော့်ဆီကို ဒုတိယမြောက်အနေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး အလှူငွေ ထည့်တာကတော့ မ chitsuelay ဖြစ်ပါတယ်..
ခုလိုလှူဒါန်းရသော အကျိုးကြောင့် မ chitsuelay တစ်ယောက် တောင်းဆုတွေ ပြည့်ဝပြီး ဘ၀ခရီးတစ်လျှောက် ဆန္ဒများ လက်တွေ့ အကောင်အထည် ပေါ်နိုင်ပါစေလို့
MEF မှ မောင်နှမများအားလုံးကိုယ်စား ကျွန်တော်က ဒီနေရာလေးကနေ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်...
(အစ်မရေ... ခုမှပဲ online ပြန်ဝင်နိုင်လို့ reply ပြန်တာ နောက်ကျသွားတယ်... sorry ပါ အစ်မရေ.. :) )
ကျွန်တော့်ဆီကို တတိယမြောက်အနေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး အလှူငွေ ထည့်တာကတော့ မ HH ဖြစ်ပါတယ်..
S$30 တိတိ ကျွန်တော့်ဆီ online banking မှတဆင့် Transfer လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်....
ခုလိုလှူဒါန်းရသော အကျိုးကြောင့် HH တစ်ယောက် တောင်းဆုတွေ ပြည့်ဝပြီး ဘ၀ခရီးတစ်လျှောက် ဆန္ဒများ လက်တွေ့ အကောင်အထည် ပေါ်နိုင်ပါစေလို့
(ဒီတစ်ခါတော့ pm မှာ ညီမလေးဆိုလို့ ကျေနပ်သွားပါပြီ.Cheesy . တော်သေးတယ်.. ကိုဂျွန်မိုးအိမ်လို့ ထပ်မခေါ်လို့ Tongue
ဒါတောင် ကျွန်တော်က reply ပြန်တာ စာရေးပျင်းပြီး copy/paste အလုပ်ကောင်းတာ အစ်ကို အစ်မ ဝေါဟာရမှာ error ဖြစ်သွားသေးတယ်... :&#039;(
ဆောရီးနော်.. ဘုန်းကြီးခေါင်းခေါက်ပြီး ကန်တော့ ပြောရတာ စိတ်တော့ မကောင်းဖူး :e)
မကေပီဇက် ပြန်သွားပြီလားမသိဘူး... :?
အစ်ကို ခုမှ တရေးနိုးတယ်.. ဟီး ဟီး
အစ်မ 19 ရက်နေ့က ပြန်တယ်လေ.နော်...
မနေညို (21.12.2009) ဒီနေ့ည ရန်ကုန်ပြန်မှာပါ
နေပြည်တော်မှာရှိသော မန်ဘာများ အလှူငွေထည့်ဝင်နိုင်ရန်အတွက်
ဟိန်းလေး 24 ရက်နေ့ထိ နေပြည်တော်မှာရှိနေပါမယ်
အလှူငွေထည့်ဝင်ကြသော ဖိုရမ်မန်ဘာဝင် အကို၊ အမ များအား ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျမ်းမာချမ်းသာပြီး လုပ်သမျှအောင် ဆောင်သမျှမြောက်နိုင်ကြပါစေလို့
အလင်းပျိုးတဲ့လက်တွေ စောင့်နေတယ် ။
&quot;သုခရိပ်မြုံ &quot; က တာထွက်လာပြီလေ..
မင်း လည်း ဆွတ်ယူခွင့်ရှိတယ်လေ..။
အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ အေအိုင်ဒီအက်စ် ကူးစက်ခံ ကလေးသူငယ်များအတွက် ၂၀ ရက် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၀၉ အင်ယားကန်စောင်း စိမ်းလန်းစိုပြေဥယျာဉ်မှာ DOI ( Dream Of Inferior Poretry Club) မှ ကဗျာဆရာလူငယ်တွေစုစည်းပြီး.. အလင်းပျိုးမယ့်လက်ဆိုတဲ့ စာနာမှု ကဗျာရွှတ်ပွဲလေးတစ်ခု စီစဉ်ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ စုစုပေါင်း ကဗျာ(၁၃)ပုဒ် ရွတ်ဆိုကြပြီး ကဗျာချစ်သူများပါ ပါဝင်နိုင်တဲ့ ပါဖောင့်မန့်အတ် ကဗျာကိုလည်း စုစည်းရေးစပ်ခဲ့ကြတယ်… HIV .. သရုပ်ဖော်.. ပြကွက် တစ်ခုကို ပါဝင်ပြသခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ရရှိတဲ့ အလှူငွေတွေကို သုခရိပ်မြုံ HIV ကူးစက်ခံမိဘမဲ့ကလေးများဂေဟာကို လှူဒါန်းကြမယ်လို့ သာဓုခေါ်ကြည်နူးဝမ်းမြောက် မုဒိတာပွားဖွယ်ရာကြားသိရပါတယ်။ အဲဒီ့ကဗျာရွတ်ပွဲမှာ မင်းယွန်းသစ်က ဒီကဗျာလေးကို ရွတ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒီ စာပိုဒ်လေးကလည်း အိန္ဒြာ (http://eaindrar.blogspot.com/) ရဲ့ ဘလော့ကနေ ကူးလာတာပါ...
ကျွန်တော်တို့ မောင်နှမတွေ အလှူလုပ်မယ့် သုခရိပ်မြုံလေးအကြောင်းကို ပိုပြီး သိမြင်လာအောင် link လေး ယူခဲ့တာပါ....
ကျွန်တော့်ဆီကို စတုတ္ထမြောက်အနေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး အလှူငွေ ထည့်တာကတော့ konge ဖြစ်ပါတယ်..
ခုလိုလှူဒါန်းရသော အကျိုးကြောင့် konge တစ်ယောက် တောင်းဆုတွေ ပြည့်ဝပြီး ဘ၀ခရီးတစ်လျှောက် ဆန္ဒများ လက်တွေ့ အကောင်အထည် ပေါ်နိုင်ပါစေလို့
ကျွန်တော့်ဆီကို ပဉ္စမ မြောက်အနေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး အလှူငွေ ထည့်တာကတော့မ နွေဦး ဖြစ်ပါတယ်..
ခုလိုလှူဒါန်းရသော အကျိုးကြောင့် နွေဦး တစ်ယောက် တောင်းဆုတွေ ပြည့်ဝပြီး ဘ၀ခရီးတစ်လျှောက် ဆန္ဒများ လက်တွေ့ အကောင်အထည် ပေါ်နိုင်ပါစေလို့
MEF မှ မောင်နှမများအားလုံးကိုယ်စား ကျွန်တော်က ဒီနေရာလေးကနေ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်...နော်..
ခုဆိုရင် မ KPZ ကိုယ်စား
ဦးလှမင်းမောင်-ဒေါင်္ံချိုချိုသင်း မိသားစု - S$100
မ chitsuelay - S$100
မ HH - S$30
konge - S$30
မ နွေဦး - S$30- စုစုပေါင်း S$290 တိတိ ကို ကောက်ခံပေးထားပါတယ်ရှင်.. :)
ယခုဆိုရင် pooh.kglay (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php?action=profile;u=9064)
ကနေ အလှုငွေ 1သောင်းလှုဒါန်းသွားပါတယ်ခင်ဗျာ ခုလိုလှုဒါန်းရသောအကျိုးကြောင့် ညီလေးဖြစ်ချင်တဲ့ အတော်ဆုံး Network engineer ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေလို့ ဖိုရမ်ကညီအကိုအမများကိုယ်စား အကိုဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ကွာ ညီလေးတို့မိသားစုအားလုံးလည်းစိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးအလှုရေစက်လက်နဲ့မကွာ လှုနိုင်တန်းနိုင်ပါစေဗျာ
အခုလို ဆုတောင်းပေးသော ကိုေ၀၀ါး နှင့်တစ်ကွ ဖိုရမ်မှ မောင်နှမ များကိုလဲ ကျွန်တော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ပါဝင်လှူဒန်း ခွင့်ရတဲ့ အတွက်လဲ အတိုင်းအထက်အလွန် ၀မ်းသာပါတယ် တကယ်ပါဗျာ ဒီဖိုရမ် ကြီး နဲ့ မိသားစု
ဖြစ်နေပါပြီ နောက်အလှူများမှာလဲ ပိုလှူနိုင်အောင် ကြိုးစားသွားပါမယ် ပြီးတော့ ကျွန်တော် လူအားနဲ့ လဲ ကူညီ
ချင်ပါသေးတယ် အခြေအနေပေးရင်တော့ ရရာ နေရာက နေ ၀င်ကူညီပေးပါမယ်..
ဖိုရမ်မှ ညီကိုမောင်နှမ အားလုံးကိုခင်မင်လျက်
ဒီနေ့အထိ လက်ခံရရှိတဲ့ အလှူငွေစာရင်းကို တင်ပြလိုက်ပါတယ် ။
ကျန်ခဲ့သူရှိရင်လဲ ပြန်ပြောပေးဦးခင်ဗျာ ။
ကဲ...နေညို ပြန်လာပါပြီ။ ရန်ကုန်ကိုရောက်နေပါပြီ။ နေပြည်တော်ရောက်တဲ့ရက်တွေမှာ အင်တာနက်ကလည်း
မသုံးနိုင်ဖြစ်သွားလို့ပါ။ အလှူရှင်ကျန်သေးတယ် ကိုရာမည။
ဖိုရမ်က အတက်ကြွဆုံး မန်ဘာလေး ကိုnyinyi27 &amp; မဂျွန်မိုးအိမ် တို့ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ယောက် ကို အလှူငွေ ကျပ် တစ်သောင်း ဆီပါ။
ပြီးတော့ တစ်ယောက်ရှိပါသေးတယ်။ သူကတော့ဖိုရမ် မှာ နာမည်အကြီးဆုံး ( ဟိဟိ)
မနေညို ဖြစ်ပါတယ်။ မနေညို ကလည်း ဖြစ်လေရာဘ၀တိုင်းမှာ အသည်းကွဲတဲ့ဝေဒနာ ကင်းလွတ်စေဖို့တဲ့
( ဘာ..ဘာ..ဘာမှမဆိုင်) :2: :2:
အလှူငွေ US $ 10 ကြီးများတောင် လှူဒါန်းပါတယ်ရှင်။ :shy
အလှူငွေ များကို မKPZ နဲ့ဆုံဖြစ်တဲ့အခါ နေညို တို့ အသေးစိတ်တင်ပြပေးပါ့မယ်။
အားလုံးကို ဖိုရမ်ကိုယ်စား အထူးပင်ကျေးဇူးတင် ပီတိဖြစ်ရပါကြောင်း။
စိတ်မပူုနဲ့မောင်လေး ။ အမ ကောင်မလေးပါ ရှာပေးမှာပေါ့။ ဒီလောက်သဘောကောင်းရုပ်ချောတဲ့ ငါ့မောင်လေးကို။ ;)
အမ အဆင်မပြေတုန်း ဒီအလှူကိစ္စကို တတ်အားသရွေ့ ကူညီပေးတဲ့ မောင်လေးေ၀၀ါး ကို အထူးပင်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်။
အခုလိုမျိုးဖြစ်မြောက်အောင် ကြိုးစားပေးတဲ့ မကေပီဇက်နဲ့တကွ အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးပဲ တင်ပါတယ်
မလှုခင်ကတည်းက ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်မိပါတယ်။
ကျနော်တို့လည်း အရင်ကတည်းက ဒီလိုအစီစဉ်မျိုးကို အရမ်းဖြစ်ချင်ခဲ့တာပါ။
အချိန်တစ်ခုအနေနဲ့ အားလုံးကို organize မလုပ်နိုင်လို့ပါ။
မအားတဲ့ကြားက အခုလို အကောင်အထည် ဖော်ပေးကြတဲ့ အသင်းဝင်တွေကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားရင်း
ကျနော်လည်း ဂျွန်မိုးအိမ်ဆီ ဆက်သွယ်ပြိး နိုင်သလောက် လှမ်းပို့လိုက်ပါဥိးမယ်။
ဒီနေ့အထိ နောက်ဆုံး ရရှိတဲ့ လှူဒါန်းငွေများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။
ကျွန်တော်စာရင်းသွင်းတာ ကျန်တဲ့သူများရှိရင် အသိပေးပါဦးခင်ဗျာ ။
ဟိန်းလေးဆီကို ပထမဆုံးဆက်သွယ်လှူဒါန်းလာတဲ့ အလှူရှင်ကတော့
အကို ကိုမင်းအောင် ဖြစ်ပါတယ်
အကို့ဆီက အလှူငွေ သုံးသောင်းကျပ်တိတိ ကို ဟိန်းလေးခုပဲလက်ခံရရှိပါတယ်ရှင်
ခုလိုလှူဒါန်းရသော အကျိုးကြောင့် အကိုတို့မိသားစုအားလုံးလည်းစိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီး လိုအင်ဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ဝပြည့်စုံပါစေလို့
နောက်ထပ် အလှူရှင် တစ်ယောက်ထွက်ပေါ်လာပြန်ပါပြီင်္။
အလှူငွေ ကတော့ US $ 100 ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ဒီလို အလှူဒါန နဲ့တူသောအကျိူးကိုထပ်တူထပ်မျှရပါစေရှင်။
ပထမအကြိမ်မြောက် အလှူပွဲ မှနောင် ကာလတိုင်အောင် လှုနိူင် ကြပါစေဗျာ......... :4:
အားလုံးလည်း တတ်အားသမျှ လှုပါဦးဗျို. ...........
ဘွန်တော သတ်ပူရိသ အပေါင်း သူတော်ကောင်းတို. :4:
ဒီနေ့အထိ လက်ခံရရှိသော အလှူငွေ စာရင်းဖြစ်ပါတယ် ။
ကျန်ရှိနေခဲ့ရင် ပြန်ပြောပါဦးခင်ဗျာ ။
ဖိုရမ်ကို စတင်တည်ထောင် အကောင်အထည်ဖေါ်ပေးခဲ့တဲ့
ကိုရေခါး ကလည်း အလှူငွေ တစ်သောင်းကျပ် ပါတဲ့။
ကိုရေခါး ရေ ..ဖြစ်လေရာ ဘ၀တိုင်းမှာ အခုလိုပဲ အများကို အကျိူးပျြျုနိုင်သူဖြစ်ပါစေရှင်။
အမေနေညိုနဲ့အမkpz ရေ အလှုငွေလက်ခံရမယ့်နောက်ဆုံးရက်ကဘယ်နေ့လဲဟင် ကျွန်တော့်ကိုမေးနေကြတယ် လွတ်လပ်ရေးနေ့ဆိုရင်ရောမကောင်းဘူးလားမေးနေကြတယ် အားလုံးအလုပ်ပိတ်မှာမို့တဲ့ပြောကြတယ်
ကျွန်တော်ကတော့အဆင်ပြေတယ်အမရေ အလှုငွေကောက်ခံရတာရောဘာရော မပြေတာက internet ဖိုးပဲ :4: အိမ်ကသာသိရင်မလွယ်ဘူး :4: အဲဒီရက်လေးသတ်မှတ်ပေးပါလားနော် (မြန်မာပြည်အတွက်နော်) ဒါဆိုမြန်မာပြည်ကလှုမယ့်လူတွေလည်း ဘယ်နေ့နောက်ဆုံးထားလှုလို့ရမယ်ဆိုတာသိသွားတာပေါ့နော်
အလှူထည့်ဝင်မဲ့ရက်ကို မခိုင် က 25.12.09 လို့သတ်မှတ်ထားပေးတယ်လေ။
ဒါပေမဲ့ အပြောင်းအလဲလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ မခိုင် ကိုတစ်ချက်စောင့်ပေးပါဦး။
မခိုင် က အလုပ်များနေလို့ပါ။ သူလည်း မြန်မာပြည်ပြန်လာခိုက်လေး မို့ပါ။
အလှူငွေကတော့ နေညို အထင်တော့ အလှူပွဲနေ့ မရောက်ခင် အထိ လှူလို့ရနိုင်ပါတယ်။
အသေးစိတ်အစီအစဉ် ကို နေညို တို့ ရေးပေးပါ့မယ်။
ကျွန်တော်နဲ့ကတော့ အစပိုင်းမှာ ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့ အထိပေါ့..နော်... :) ဒီဇင်ဘာ 25 က သောကြာနေ့ဆိုတော့ ကျွန်တော့အနေနဲ့ ဒီဇင်ဘာ 26 ရက်နေ့မှာ အလှူငွေတွေကို စုစည်းပြီး မ KPZ ကို ဆက်သွယ်ပြီး လွဲပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်......
ဒါကတော့ ပဏာမ အနေနဲ့ စဉ်းစားပြီး သတ်မှတ်လိုက်တာပါ.. အဲ့ဒီတုန်းက အားလုံးကလည်း တစ်နေရာစီ အလုပ်တွေရှုပ်နေချိန်ဆိုတော့ အနီးစပ်ဆုံး မှန်းဆလိုက်တာလည်း ပါ ပါတယ်...။
နက်ဖန်ခါတော့ သေချာလေး ညှိနှိုင်းပြီးလို့ ရက် ကို သေချာ သိရမယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်...။
ဒီကြားထဲမှာ ရှေ့မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ 25 ရက်နေ့ထက် နောက်ဆုတ်သွားရင်လည်း အလှူငွေ ကောက်ဖို့ အချိန် ပိုရပြီး များများ လှူရတာပေါ့နော့....
(လကုန်ခါနီးဆိုတော့ ပိုလည်း အဆင်ပြေသွားတာပေါ့.. :2: :haha: ဟုတ်ဝူးလား :ok )
မောင်လေးေ၀၀ါး ပြောသလို ရုံးပိတ်ရက် မျိုး စနေ တနင်္ဂနွေ ဆို ရင် ပိုကောင်းတာပေါ့... ဒါမှ အားလုံး ဆုံနိုင် လာနိုင်မှာပေါ့လေ... နောက် ရက် တစ်ခုကို သတ်မှတ်လိုက်တော့ ပြင်ဆင်ဖို့ အချိန်ရတာပေါ့လေ...
(ကိုယ်တွေကတော့ အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံပဲ ကြည့်ရုံပေါ့ :( )
ဟုတ်ကဲ့ ကျနော် စီဝိုင် ကိုလဲချန်မထားပါနဲ. ။ MEF ကိုသိပ်မရောက်ဖြစ်လို. ကိုေ၀၀ါးပြောပြမှ ကျနော် အလျှုအကြောင်းကို သိတာပါ ။
သူနဲ. တွေ.ဖို.ချိန်းထားပါတယ် ။ကျနော် cy လဲ ခုနှစ်ထောင် ကျပ် လျှုပါမယ် ။ နောက်ပြီး စင်ကာပူရောက်နေတဲ့ ကယ်မီကယ်က
အမ frodo ကလဲ တစ်သောင်းကျပ် လျှုပါတယ် ။ နောက်ပီး ကျနော်လဲအလျှုနေ.မှာ လိုက်ချင်ပါတယ် ။
ကိုေ၀၀ါးရေ ကျနော်ဖုန်းက ၀၉၅၀၁၆၇၆၀ ပါ ။ အလျှုငွေကောက်ဖို.အတွက် ကျနော်ဖုန်းကို ဆက်ပြီး date ပေးပါနော် ။
ဟုတ်ပါတယ် လွတ်လပ်ရေးနေ. လုပ်ပါလို. တောင်းဆိုပါရစေ ။ အလျှုငွေတွေကို ၁ ရက်နေ.နောက်ဆုံးထားလိုကပ်ပါနော် ။ အဲ့ဒီအချိန်ဆို လခလဲထုတ်ပီလေ ။
ပြီးတော့ အမတို. မြန်မာငွေ ရော လဲပြီးပီလား ။
ဟုတ်ကဲ့ပါ ခုဆိုရင် ညီလေး cy (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php?action=profile;u=903) က 7000 ကျပ် အမfrodoက 1သောင်းကျပ် ကိုလက်ခံရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ အခုလိုလှုဒါန်းရသောအကျိုးကြောင့် ညီလေးcy ရော အမ frodo ရော လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းများလည်း အဆင်ပြေကြပါစေ
စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့ မိမိရဲ့ပန်းတိုင်ကို မြန်မြန်လျှောက်လှမ်းနိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ အားလုံးကတော့ပြောနေကြတယ်အမတို့ရေ လွတ်လပ်ရေးနေ့လုပ်ပါလားတော့ပြောနေတယ်အလုပ်နားရက်မလို့ပါတဲ့ အားလုံးကခုလိုတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ဆောင်ရွက်တာကိုအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ယခုဆိုရင် ကျွန်တော်ဆီမှာ
စုစုပေါင်း 37000ကျပ်ကိုလက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ နောက်ရက်ကျရင် mef မင်းသားလေးလည်းအလှုငွေထည့်မယ်နော် :2: ခုတော့စုတုန်း :e
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာ ဖိုရမ်က အလှူကတော့ ကြားရယုံနဲ့ တင်
ပျော်စရာကြီးဗျာ..ကြည်နူးစရာ.. ၀မ်းသာစရာ ဗျာ..
ဖိုရမ် သူ/သား အပေါင်းတို့ ကျန်းမာကြပါစေ ချမ်းသာကြပါစေ
ဗျာ ..အလှူနေ့ ကြရင်လဲ ပျော်စရာကြီး နေမှာပဲ.. ကုသိုလ်တွေ
လဲ အများကြီးရမှာ .. ၀င်ရောက်လှူတန်း ကျရင်းနဲ့ ပါဝင် ကုသိုလ်
ယူနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်း နိုးဆော်အပ်ပါတယ် (ဂေါပဂ အဲလေ
ဟုတ်ပေါင် pooh ကောင်လေး) :7:
ဖိုရမ်မှာ ညီအကို မောင်နှမ အားလုံးကို ခင်မင်လျက်
ဒီနေ့အထိ ကောက်ခံရရှိငွေစာရင်း တင်ပြလိုက်ပါတယ် ။
ကျန်ရှိနေခဲ့တာရှိရင် အသိပေးပါဦး ။
မKPZ က အခုရန်ကုန်ရောက်နေပါပြီး ။ အဲ့ဒါ မနက်ဖြန်(26.12.2009) မှာ ဖိုရမ်က မောင်နှမများတွေ့ဆုံပွဲတစ်ခုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် ။
နေရာကတော့ သမိုင်းလမ်းဆုံက Net 40 ဖြစ်ပါတယ် ။
အချိန်ကတော့ မနက် 11 နာရီခွဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
တကယ်လို့ မတွေ့ခဲ့လို့ ရှိရင် မKPZ ဖုန်း 095405537 ကိုဆက်သွယ်ပေးပါခင်ဗျာ ။
ရန်ကုန်ရောက်နေတဲ့ ဖိုရမ်မောင်နှမတွေ အားလုံးကို လာရောက်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။
ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ပြီး နေ့ချင်းတင်ပေးအုံးနော် .... ကြည့်ဖို့စောင့်နေမယ် ... :7:
တောမှာလည်း . . . နှင်း
တောင်မှာ . . . နှင်း . . . နှင်း
လောကဓံတရား . . . တဲ့လားရှင်
သွေး . . . အစက်စက်
နေ . . . နေရပြီ
အထောင်တစ်ဝက်နဲ့ ဖြစ်ပါစေ . . . .
(ဒီကလေးငယ်လေးတွေအတွက် ရန်ပုံငွေရှာဖွေပေးခဲ့တဲ့ အဖြူရောင်သက်တံ့ ကဗျာရွတ်ပွဲမှာ ဆရာမကြီးမအိ ရွတ်သီခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးပါ.။)
(ဒီကလေးငယ်လေးတွေအတွက် ရန်ပုံငွေရှာဖွေပေးခဲ့တဲ့ အဖြူရောင်သက်တံ့ ကဗျာရွတ်ဆိုပွဲမှာ ဆရာမြင့်မိုးအောင်ရေးပေးပြီးရီဝေယံ၊ အေးဝတ်ရည်သောင်း စတဲ့အနုပညာရှင်တွေက ရွတ်ဆိုခံစားပေးထားတဲ့ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါ)
(ဒီကလေးငယ်လေးတွေအတွက် ရန်ပုံငွေရှာဖွေပေးခဲ့တဲ့ အဖြူရောင်သက်တံ့ ကဗျာရွတ်ဆိုပွဲမှာ အိန္ဒြာခံစားရွတ်ဆိုခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးပါ.။)
ဒါလေးကတော့ fwd မေးက ရတာလေး ကို ကျွန်တော်တို့ အလှူပြုရာနေရာအကြောင်း ကို ပိုမိုရင်းနှီးစေလိုသော စေတနာနဲ့ တင်ပေးထားချင်းဖြစ်ပါတယ်
ဖိုရမ်မှ ညီအကို မောင်နှမ အပေါင်းတို့ကို ခင်မင်လျက်.pooh ကောင်လေး
ကျွန်တော်လဲ အလုပ်က OT ရှိတယ် ။ ဒါပေမယ့် OT ဖျက်ပြီးလာဖို.ကြိုးစားပါမယ် ။
ကဲနောက်တစ်ယောက်တော့လာပါပြီ သူကတော့အားလုံးမျှော်လင့်နေကြတဲ့သူပေါ့ (အထူးသဖြင့်ကောင်မလေးတွေအချစ်တော်ပေါ့) waiwar (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php?action=profile) ခင်ဗျာ
အလှုငွေ 1သောင်းကျပ်ပါခင်ဗျာ အားလုံးကိုကျွန်တေ်ာအမKPZကိုအားလုံးလွဲပြီးသွားပါပြီ ကျွန်တော့်ကိုကျတော့ဘယ်တူမှဆုတောင်းပေးကြ၀ူး အလှုနေ့ကတော့1ရက်နေ့သေချာသွားပါပြီ ကျန်တာကိုအမနေညိုကနေ ပြောပြသွားပါလိမ့်မယ် အမနေညိုရေ အမရဲ့post ကိုအားလုံးမျှော်လင့်နေကြပြီဗျို့ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ ဖိုရမ်မှလူများလည်းလားနိုင်အောင်ကြိုးးစားပေးကြပါနော် ဖိုရမ်ကလူတွေတွေ့ဆုံရအောင်လို့ပါ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ကဲနောက်တစ်ယောက်တော့လာပါပြီ သူကတော့အားလုံးမျှော်လင့်နေကြတဲ့သူပေါ့ (အထူးသဖြင့်ကောင်မလေးတွေအချစ်တော်ပေါ့)ေ၀၀ါးပါခင်ဗျာ
ကိုကြီးေ၀၀ါး ကျန်းမာ ချမ်းသာပြီး ကောင်မလေး ချောချောလေး နဲ့ ချစ်သူဖြစ်ပါစေ..
အကိုနော် ဆုတောင်းကောင်းကောင်းလေး တောင်းပေးထားတယ်နော် ကျွန်တော်
ကို အလှူနေ့ကျရင် မုန့်ဝယ်ကျွေးရမယ်နော် ဖုန်းဖိုးတွေ ကားခ တွေ အင်တာနက်ဖိုး
တွေ အကုန်အကျခံ ပြီး အလှူအတွက် အားကြိုးမာန်တက် ကြိုးစားပေးခဲ့တဲ့ ကိုေ၀၀ါး
ကို MEF ကိုယ်စား pooh ကလေး က ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်..
ဖိုရမ်မှ မောင်နှမ အားလုံးကို ခင်မင်လျက်
မမနေညို နဲနဲအလုပ်များနေလို့ရေးဖို့အဆင်မပြေသေးတဲ့အတွက် ဟိန်းလေးအလှူအကြောင်းကိုအကြမ်းဖျဉ်းပြောပြပါမယ်
ဟိန်းလေးတို့ ဒီနေ့ (၂၆.၁၂.၀၉)နေ့ ကိုေ၀၀ါး မကေပီဇက် မနေညို ဟိန်းလေး တို့တွေ့ဖြစ်ကြပြီး
ဟိန်းလေးဆီမှာ အကိုကိုမင်းအောင်ရဲ့အလှူငွေ (၃၀၀၀၀)ကိုလည်းမမခိုင်(ကေပီဇက်)ကိုပေးပြီး နေ့လည်ပိုင်းမှာ
တလမ်းလုံး မမခိုင်ဆီကို အလှူရက် လှမ်းမေးကြတဲ့အခါ မမခိုင်က ဟိန်းလေးမပြန်ခင်ရက်ပိုင်းကိုလုပ်ချင်ကြောင်းပြောပါတယ်
ဟိန်းလေးကလည်းအလှူကိစ္စရောက်လာတဲ့အတွက် အဲ့ဒီနေ့လေးမှာ တကယ်ကိုရှိချင်ပါတယ်
ဒါပေမယ့် ဟိန်းလေးတို့ သုခရိပ်မြုံကို ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ ဟိန်းလေးတို့မှန်းထားတဲ့ ရက် ၂၈ ရက်နေ့ကအလှူရှင်ရှိပြီး လကုန်ထိ ရက်ပြည့်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်
မမခိုင် အစကပြောထားတဲ့(၁-၁-၂၀၁၀)မှာပဲလုပ်ဖြစ်ဖို့ အဲ့ဒီကျောင်းမှာရှိတဲ့ဆရာမကို စာရင်းပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်
နံရံမှာကပ်ထားတဲ့ တနေ့တာကျွေးမွေးတဲ့အစာ စာရင်းအသေးစိတ်ကိုဟိန်းလေးတို့တွေ့ပြီး နောက်ဆက်တွဲတွေ့လိုက်ရတဲ့ဇယားလေးတစ်ခုကတော့
ကလေးများရဲ့သိက္ခာအတွက် ဓါတ်ပုံရိုက်ခွင့်မပြုလုပ်ပါနှင့်ဆိုတဲ့စာလေးပါ မမခိုင်က ဒီအလှူအတွက် မှတ်တမ်းမှတ်ရာတခုခုလုပ်ပေးနိုင်မလားလို့မေးတော့ ဂုဏ်ပြုလွှာလုပ်ပေးနိုင်ကြောင်းဆရာမတွေကပြောပါတယ်
နောက်ပိုင်းဟိန်းလေးတို့ မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ အဝေးကနေလှမ်းပြီး သူတို့ကစားနေတာ စားနေတာတွေကိုရိုက်လို့ရပါတယ် မျက်နှာကိုထိထိမိမိတော့ရိုက်လို့မရပါဘူးလို့ပြောပါတယ်
ဟိန်းလေးကတေ့ာ မမခိုင်ကိုဈေးဝယ်ပေးရုံပဲတတ်နိုင်ပါမယ် ခွင့်မရလို့ပြန်ရမှာပါ :e :e
ဒီနေ့ဟိန်းလေးတို့ နဲ့အတူ ဒုက္ခခံပေးတဲ့အတွက် ကိုေ၀၀ါးကိုကျေးဇူးပါ
ဟိန်းလေးရဲ့လက်မှတ်အခက်အခဲကြောင့်ရန်ကုန်သွားဖြစ်မသွားဖြစ်မသေချာရင်းနဲ့ကနေ ရုတ်တရက်ထလာခဲ့ရတာမို့ ဘယ်သူ့အတွက်မှ မုန့်မ၀ယ်နိုင်ခဲ့မိတာ တောင်းပန်ပါတယ်
ကိုသော် လာခဲ့လေ ဟိန်းလေးတို့ 28.12.2009 မန်းဒေးဆုံဖြစ်မယ် အဲ့ဒီနေ့မှာပစ္စည်းဝယ်ဖို့တိုင်ပင်ပြီး တစ်ခါထည်းဘာဝယ်ပြီးလှူမယ်ဆိုတာကို မမခိုင်နဲ့ညှိပြီး လုပ်ကြမှာလေ
၁ ရက်နေ့ အမှီလာခဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ် သုခရိပ်မြုံရဲ့လိပ်စာကို အထက်မှာဖော်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ် မမခိုင်ရဲ့ဖုန်းကိုဆက်သွယ်လိုက်ရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ် ကိုသော်
မနေ့က သုခရိပ်မြုံကိုရောက်ခဲ့တဲ့အခါ ကလေးလေးတွေ ထမင်းစားချိန်ပြီးလို့ အဟာရတိုက်နေတဲ့အချိန်ပါ
စုစုပေါင်း ကလေး ၄၆ ယောက်ရှိပါတယ်
အရွယ်အလိုက် သူအခန်းနဲ့သူထားထားပါတယ် အခန်းက အပေါ်ထပ်အောက်ထပ် နဲ့ တစ်ထပ်ဆောင်လည်းရော အမျိုးမျိုးပါပဲ
ဘာတွေလောလောဆယ်လိုအပ်လည်းမေးတဲ့အခါမှာ အင်ဗာတာ ဘက်ထရီနဲ့
တခြား ကျောင်းပုံနှိပ်စာအုပ် ကို မူလတန်းကနေ ဆဌမတန်း ထိ လိုအပ်နေပါတယ်
ဗလာစာအုပ်တွေနဲ့အရုပ်တွေကတော့များကြီးတွေ့ရပါတယ် ဟိန်းလေးတို့တောင် အရုပ်တွေများလွန်းလို့ပြန်အလှူခံဖို့စဉ်းစားမိသေးတယ် :haha: :haha: :haha:
အဲ့ဒီတော့အကြမ်းဖျဉ်း လျာထားတဲ့ လှူမယ့်ပစ္စည်းပေါ့နော် မနေညိုရေးရင် ပစ္စည်းပြောင်းကောင်းပြောင်းပါလိမ့်မယ်
အင်ဗာတာ ၊ ၊ ဘက္ထရီ ၊ ဆန်၊ မုန့်၊ အိုဗာတင်း ၊ ဆေးပဒေသာပင် ၊ အင်္ကျီ ၊
လို့လျာထားပါတယ် အသေးစိတ်စာရင်းကို ဒီနေ့ နေ့လည် ဒါမှမဟုတ် နက်ဖြန်ဆိုသိရပါပြီ
အားလုံးပဲ ဆောရီးပါ ။ နေညို နည်းနည်း လမ်းများသွားလို့ပါ။ :4:
အလှူ ကိစ္စကို ဟိန်းလေး တင်ပြထားသလိုပါပဲ။
နေညို တို့ ဒီ ပထမ အကြိမ်မြောက် အလှူပွဲလေး ကို 2010 ရဲ့ နှစ်သစ် အစမှာပဲလုပ်ဖြစ်ပါမယ်။
အလှူငွေ ကို မြန်မာကျပ်ငွေ ငါးသိန်း ( 500,000-/) လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
မခိုင် မှာရှိတဲ့ အရင်လက်ဟောင်းအလှူငွေများ နှင့် နေညိုတို့ ယခု ကောက်ခံရရှိသောငွေများထဲမှ
ယခု ပထမအကြိမ်မြောက်အလှူအတွက်ကို 500,000-/ ကျပ်တိတိသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။
သုခရိပ်မြုံလေးမှာ လိုအပ်ချက်ရှိတာလေးကို လှူဖို့မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ မီးပျက်ရင် သုံးဖို့အတွက်
အင်ဗာတာ နှင့် ဘက်ထရီ ကတော့ အခု တလုံးလိုအပ်နေပါတယ်။ သုခရိပ်မြုံလေးမှာ အဆောင်သုံးဆောင်ရှိပါတယ်။
တစ်ဆောင်က နှစ်ထပ်ဖြစ်တော့ အောက်ထပ်မှာ လိုနေလို့ပါတဲ့။ နေညို တို့ အနေနဲ့ကလည်း ကိုယ်လှူချင်တာထက်
တကယ့်ကို အသုံးတည့် အဆင်ပြေမဲ့ ပစ္စည်းလေး လှူလိုက်ချင်တာနဲ့ အင်ဗာတာနဲ့ ဘက်ထရီ ကိုကောာင်းကောင်းလေး
လှူလိုက်ချင်ပါတယ်။ မောင်လေးေ၀၀ါးက ဒီကိစ္စကို တာဝန်ယူပေးပါတယ်။ ဒီအတွက် 200,000-/ ကျပ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ပြီးတော့ ဆန်အိတ်2အိတ်လှူပါမယ်။ 50,000-/ ကျပ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဆေးပဒေသာပင်လည်းရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲ့ဒီအတွက်လို့ 30,000-/ကျပ် လို့ သတ်မှတ်ပြီး (1.1.2010) နေ့ရဲ့ အာဟာရ တနေ့တာအတွက် က 50,000-/ ကျပ်ပါ။
ကျန်တဲ့ငွေများကိုတော့ ကလေးတွေအတွက် နေ့တိုင်း အိုဗာတင်း ကို မဖြစ်မနေတိုက်ရပါတယ်တဲ့။
ဒီအတွက် အိုဗာတင်း + ဘီစကစ် ၀ယ်ပါမယ်။ ကလေးတွေက ဆိုဒ်စုံပါ။ အကျီလေးတွေကို အဆင်ပြေသလို ၀တ်ပေးရရှာပါတယ်တဲ့။
ဖြစ်နိုင်ရင် နေညို တို့ အကျီလေးများလည်း ၀ယ်ပါမယ်။ အရုပ်လေးများနဲ့ ကျောင်းစာအုပ်ကို စဉ်းစားမိပေမဲ့ အဲဒါတွေက
သုခရိပ်မြုံလေးမှာ များနေတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ ဟိန်းလေးနဲ့ မခိုင်တောင် ကလေးတွေနားက အရုပ်လိုချင်လို့တဲ့။
၀ယ်ပေးလိုက်ကြပါဦး။ :2: :2:
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း မခိုင် ၊ ဟိန်းလေး ၊ နေညို နဲ့ေ၀၀ါး တို့ဆီဆက်သွယ်ပြီး အလှူ အကြောင်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
(1.1.2010) နေ့မှာ အဆင်ပျြေနိုင်မဲ့ မန်ဘာများလိုက်ပါပေးကြပါလို့ ။ကိုချစ်သီး နဲ့ ဂျွန်မိုးရေ...
ဓါတ်ပုံ မရိုက်ရပါဘူးတဲ့။ ဒါပေမဲ့ အဝေးကနေတော့ ရိုက်ခဲ့လိုက်ပါ့မယ်။ ကလေးလေးတွေက ချစ်စရာလေးတွေပါ။
ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင် ရောဂါခံစားနေရသူများလို့ တောင်မထင်မိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့လေးတွေကိုလည်း
သနားစရာမျက်လုံးမျိူးနဲ့ မကြည့်ရက်ပါဘူး။ ဒီလို အလှူလေးဖြစ်လာဖို့အတွက် ၀ိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးကြတဲ့
သူများ အားလုံးကိုကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။အားလုံးမျှော်လင့်တဲ့ (4.1.2010) မှာ မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်
စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးအနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ် ။ အကြံဥာဏ်များကိုလည်း မျှော်လင့်လျှက်ပါနော်။
poohကလေး ကတော့ လိုက်မှာပဲနော် :4: ဆိုင်မှာ ခွင့်တရက်တောင် ယူလိုက်ပြီ သောကြာနေ့ အတွက် သင်တန်းတွေလဲ ဖျက်လိုက်တယ်
ကားခ ကိုလဲ ကိုကြီးေ၀၀ါးက စိုက်ပါမယ်တဲ့ နေ့လည်စာလဲ ကိုေ၀၀ါးကပဲ ကျွေးမယ်ပြောတယ် အနော်တို့က3ရက်နေ့မှ လခထုတ်
ပေးတာလေ လောလောဆယ်တော့ ဘိုင်ပျက်နေတော့ ကိုေ၀၀ါးကိုပဲ အားကိုရတော့မယ် ဟီဟီ ကုသိုလ်လဲ ရမဲ့ အရေးဆိုတော့
ရရာနေရာကနေပြီးတော့ ကုသိုလ်ဝင်ယူလိုက်ပါအုံးမယ် ပြန်ရောက်ရင် အကုန်လုံးကို ပြန်ခွဲပေးမယ်နော် ....
ဖိုရမ်မှ မောင်နှမ များကို ခင်မင်လျက်
Aung Khaing Oo
အခုလို ဖိုရမ်နေနဲ့ အလှူလေးဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ထားတော့ ပိုကြည်နူးမိတယ်ဗျာ။ ဦးစီးဦးဆောင်တဲ့လူတွေကလည်း သုခရိမ်မြုံရဲ အမှန်တကယ်လိုအပ်မယ့် ကိစ္စတွေကိုပဲ ရွေးလှူတာဆိုတော့ ပိုပြီးလေးစားမိတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ နယ်မှာဆိုတော့ မလာနိုင်ဘူဖြစ်နေတယ်။ အလှူငွေထည့်လို့ရမယ့် လိပ်စာလေးတင်ပေးပါ။ တပ်နိုင်သရွေ့ပါဝင်ချင်လို့ပါ။
ဘယ်နယ်မှာလဲ မသိဘူးနော်။ ရန်ကုန်ကိုပဲ ပို့ပေးမလို့လား အကို။
ဒါဆိုရင်တော့ မKPZ ဖုန်း 095405537 ဒီကိုအရင်ဆက်သွယ်ကြည့်ပါလား။
ဒါမှ မဟုတ် နေညို တို့ဆီ ဘဏ်ကနေလွဲပေးလို့လည်း ရပါတယ်။
အကို လှူချင်တယ်ဆိုရင် နေညို ဆီ PM ပို့လိုက်ပါ။ ပြီးတော့ အကိုအဆင်ပြေမဲ့
နည်းလမ်းကိုပြောလိုက်ရင် နေညို တို့ အတတ်နိုင်ဆုံး လုပ်ပေးပါ့မယ်။
ယခုပဲ ဒေါက်တာကနေ အလှုငွေကျပ်1သောင်းလှုဒါန်းသွားပါတယ်ခင်ဗျာ အမKPZ ကိုလွဲပေးပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာ ခုလိုလှုဒါန်းရသောအားကြောင့် ဒေါက်တာတစ်ယောက်ဖြစ်လေရာဘ၀မှာ ကောင်မလေးချောချောလေးတွေနဲ့တွေ့ပါစေဗျာ အလှုနေ့ကျရင်လာနော်ဒေါက်တာ မလာရင်တော့ အမKPZ ပြောသလို ဟွန်း ဟွန်း ဟွန်း ဖြစ်သွားမယ် ::) ::) ဒေါက်တာဆိုတာကတော့တခြားလူမဟုတ်ပါဘူးနော် ကျွန်တေ်ာတို့ဖိုရမ်ရဲ့မိသားစုဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖြိုးဝေလင်း (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php?action=profile;u=2219) ပါပဲခင်ဗျာ အလုပ်အားရင် ဖိုရမ်ထဲဝင်နော်ဒေါက်တာ
မတွေ့တာ တော်တော်ကြာပီဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာကြီးရော ပေါ်လာပြီပေါ့နော်... :) (လူတွေ ပို ပို များလာတော့ ကောင်းပါ့ရှင်.... မနာလိုချင်စရာ... ဟီးဟီး... မုဒိတာ ထားပါတယ်နော်....)
မနေညိုရေ... ဓါတ်ပုံ ရိုက်ခွင့်မပေးတာကိုတော့ နားလည်ပါတယ်လေ... တဖက်ကကြည့်ရင်လည်း ဖြစ်သင့်ပါတယ်... ကိုယ်တွေက အမှတ်တရ ပုံလေးတွေ ကြည့်ချင်ရုံဆိုပေမယ့် တစ်ဖက်မှာ အခက်အခဲတွေ ဖြစ်သွားရင် စိတ်ကောင်းရမှာ မဟုတ်ဖူး... အားလုံးကို အဆင်ပြေသလိုပေါ့....။
လှူမယ့် ပစ္စည်း စာရင်းလေးတွေ ပြင်ဆင်ထားတာလည်း ကောင်းပါတယ်နော်..... နောက် နှစ်သစ်မှာ အလှူလုပ်တော့လည်း အမှတ်တရပဲပေါ့... :)
အဲ့... တစ်ခု ရှိတာ... ကျွန်တော်တို့ လွှဲလိုက်တဲ့ ငွေလေးတွေ ရောက်မရောက် အကြောင်း ပြန်ပေးကြပါဦးနော်...
အားလုံး အစီအစဉ်တကျနဲ့ အဆင်ပြေ အောင်မြင်ကြပါစေနော်...
ဈေးနည်းနည်းစစ်မယ် .... နေညိုရေ .... :7:
ခလေးတွေ မရိုက်ရတော့လဲ ... ဒါလေးတွေရိုက်ခဲ့ပေးပါနော် ...
- ခလေးတွေ အဟာရ စားသောက်နေကြပုံ သေချာမမြင်ရအောင် ဝေးဝေးကနေ နောက်ခံထားပြီး နေညိုတို့ အုပ်စုပုံလေးပေါ့
- နေရာပတ်ဝန်းကျင် လမ်း ခြံဝင်း အဆောက်အဦး (ဆိုင်းဘုတ် တွေရှိရင်လဲပါအောင်-ကိုယ်တိုင်ရောက်သလိုခံစားရအောင်လို့)
- နေညိုတို့ MEF အဖွဲ့တွေအားလုံးနဲ့ လှူမယ့်ပစ္စည်းတွေရယ် ... (Group ပုံလေးတွေပေါ့နော်)
- နေညိုတို့ MEF အဖွဲ့တွေအားလုံးနဲ့ စေတနာဖြူစင်တဲ့ ခလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေကြသူတွေရယ် (Group ပုံလေးတွေပေါ့နော်)
- နောက်ပြီးတော့ ... နေညိုတို့ အဖွဲ့သားတွေ လှူမယ့်ပစ္စည်းတွေ သွားရောက်ဝယ်ယူနေကြတဲ့ပုံတွေ (နောက်ကျသွားပြီလားမသိဘူး) အပါအ၀င် ...
အဖွဲ့သားတွေ လှုပ်ရှားနေမှု အမှတ်တရ လျှပ်တပြတ် ရိုက်ချက်လေးတွေပေါ့နော် ....
မလာရောက်နိုင်ကြတဲ့ MEF က မန်ဘာတွေအားလုံးကိုယ်စား .... စိတ်ထဲကနေ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ရောက်နိုင်အောင်လို့ပါ ....
အဲ .. မေ့လို့ .... ဂုဏ်ပြုလွှာလေး ရောပေါ့ .... အဲ့ဒါလေးကို သေချာရိုက်ပေးနော် နောက်ပြီး ညီလေးရာမညကို ဖိုရမ်ဧည့်ခန်းထဲမှာ ချိတ်ခိုင်းရမယ်
ဈေးနည်းနည်းစစ်မယ် .... နေညိုရေ ....
- နေရာပတ်ဝန်းကျင် လမ်း ခြံဝင်း အဆောက်အဦး (ဆိုင်းဘုတ် တွေရှိရင်လဲပါအောင်-ကိုယ်တိုင်ရောက်သလိုခံစားရအောင်လို့)
- နေညိုတို့ MEF အဖွဲ့တွေအားလုံးနဲ့ လှူမယ့်ပစ္စည်းတွေရယ် ... (Group ပုံလေးတွေပေါ့နော်)
- နေညိုတို့ MEF အဖွဲ့တွေအားလုံးနဲ့ စေတနာဖြူစင်တဲ့ ခလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေကြသူတွေရယ် (Group ပုံလေးတွေပေါ့နော်)
- နောက်ပြီးတော့ ... နေညိုတို့ အဖွဲ့သားတွေ လှူမယ့်ပစ္စည်းတွေ သွားရောက်ဝယ်ယူနေကြတဲ့ပုံတွေ (နောက်ကျသွားပြီလားမသိဘူး) အပါအ၀င် ...
Quote လုပ်တာများသွားပေမယ့် အဲဒါအားလုံးကိုထောက်ခံချင်လို့ပါ..အခု ကျွန်တော်တို့မှာ အလှူမှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံလေးတွေ မမြင်ရသေးခင်မှာတောင် မနေညိုတို့ မKPZ တို့ ဟိန်းလေးတို့ ညီလေးေ၀၀ါးတို့အဖွဲ့တွေ ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ အစီအစဉ်လေးတွေ အခြေအနေလေးတွေကို ၀င်ဖတ်နေရတာနဲ့တင် ကြည်နူးမိနေတာပါ.ကိုချစ်သီးတောင်းဆိုတာလေးတွေပါရမယ်ဆိုရင်တော့ အတိုင်းအထက်အလွန်ပါပဲခင်ဗျာ.ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တာကိုလဲ အားမလို အားမရဖြစ်မိပါတယ်.အစ်မနေညိုတို့ တစ်ဖွဲ့လုံး ဒီလိုတွေလုပ်ဆောင်နေတာကြတာအတွက်လဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ..ဖိုရမ်အတွက် အပင်ပန်းခံပြီးလုပ်ဆောင်နေတာတွေအတွက် အမြဲအမှတ်ရနေမှာပါ..ဒီလိုအလှူလေးဖြစ်လာအောင်လုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့သူတွေရော ပါဝင်လှူဒါန်းကြတဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေရော အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပါ...မျှော်နေပါ့မယ်ဗျာ..မနေညိုတို့ အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ ကျွန်တော်တို့လိုလူတွေအတွက် မှတ်တမ်းလေးတွေ တင်ပေးခဲ့ပါဦး..
အဟင့်...နိုချင်တယ်...နေညို ချည်းပြောနေကြလို့။ နေညို က ဈေးဝယ်တောင်မလိုက်ဖြစ်ဘူးထင်တယ်။
ရုံးက ခွင့်မရလို့။ ဟိန်းလေး လည်းသနားပါတယ်။အလှူရက် မရှိဘူး။ သူလည်းခွင့်မရဘူးလေ။
ဂျွန်မိုးရေ..မခိုင် ဒီနေ့ ပိုက်ပိုက်သွားထုတ်တယ်တဲ့။ ခဏနေလာပါလိမ့်မယ်။ အမတို့လည်း
အွန်လိုင်းကနေ အလုပ်လုပ်နေကြရတာ။ နေညို တို့ဘက်က အားနည်းချက်များရှိရင်ခွင့်လွတ်ကြပါလို့။
ဓါတ်ပုံက မိုးပြေးကိုပဲအားကိုးရမှာ။ နေညို ကကင်မရာတောင် အဖွင့်အပိတ်လုပ်တတ်ဘူးရယ်။
တတ်နိုင်သလောက်တော့ နေညို တို့ မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံလေးရိုက်ခဲ့ပါမယ်။
အလှူဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ နှင့် စာရွက်စာတမ်းများကို နေညိုတို့ Scan ဖတ်ပြီးတင်ပေးပါ့မယ်။
အလှူနေ့ကျရင်လည်း လာကြပါဦးနော်။ နီးရင် အချိန်နေရာ ရေးပေးပါ့မယ်။
မခိုင် ၊ မိုးပြေး၊ ဟိန်းလေး နဲ့ေ၀၀ါး တို့ကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်တယ်နော်။
ေ၀၀ါး စိတ်ချ..ကောင်မလေးရှာပေးမယ်။ အခုတောင် မေးနေကြပြီ။ ကိုေ၀၀ါးဆိုတာ..ဘူလေးလဲတဲ့။ :P :P
မ ကေပီဇက် က အွန်လိုင်း ၀င်ဖို့ အဆင်မပြေလို့ အစ်မကိုယ်စား ကျွန်တော်ကပဲ အသိပေးလိုက်ပါတယ်နော်....
အစ်မက ဓါတ်ပုံ ကိစ္စ တွေကိုတော့ သူ အတတ်နိုင်ဆုံး ပြင်ဆင်ထားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်း ဖိုရမ်က အစ်ကို အစ်မ နဲ့ မောင်လေး ညီမလေးတွေကို အကြောင်း ကြားခိုင်းပါတယ်...
အဲ့.. မနေညို ပြောသလိုပါပဲ အဓိက ကူညီပေးတာကတော့ မမိုးပြေးလေး ပါပဲ.... အားလုံးက ကိုယ့်အလုပ်တွေနေနဲ့ကိုယ်... မနားတဲ့ကြားကနေ လုပ်နေကြတော့ အသိပေးတာ နောက်ကျသွားပါတယ်....
(တကယ်တော့ အစ်မက လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ နာရီခွဲလောက်က ပြောသွားတာပါ... ကျွန်တော်ကလည်း ခုမှ အားလို့ ခုမှ တင်ပေးလိုက်ရတာပါ... sorry ပါနော်..)
ခဏနေ ဟိန်းလေးက ပိုငိုလိမ့်မယ်... (e.... ငါလည်း ငိုချင်လာပြီ....)
ပေးတာလေ လောလောဆယ်တော့ ဘိုင်ပျက်နေတော့ ကိုေ၀၀ါးကိုပဲ အားကိုရတော့မယ် ဟီဟီ
တားတားကျွေးမယ်လို့မပြောမိပါဝူးခင်ဗျ အမKPZ ရေ အချွန်နဲ့မမယ့်သူတွေရောက်နေပါတယ်ခင်ဗျ သွားရင်အမြဲမုန့်ဝယ်ကျွေးနေကြ ကျွန်တေ်ာတို့ရဲ့organizer အမကြီးKPZ ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမြဲအိတ်စိုက်အမကြီးကို လမ်းမှာတွေ့ရင်ပိုက်ဆံချေးကြနော် :2: :2: အမမိုးပြေးလေး အမနေညို ဟိန်းလေး တို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဟိန်းလေးရေ နောက်တစ်ခါကျရင်မုန့်ဝယ်ကျွေးမယ်နော် ခုတော့ဘိုင်ပြတ်လို့ တိုင်ကပ်နေရတယ် :angry:
ကိုချစ်သီးရေ တောင်းဆိုတာတွေများလွန်းနေတယ်မထင်ဘူးလားဟင် နဲနဲလောက်လျှော့ပါဦးလားနော် တစ်ခုကတော့လုံးဝနောက်ကျသွားပါပြီနော်
အဲဒါတော့လုံးဝမမှီတော့ဘူး အားလုံးပြီးသွားပြီနော် ပိုက်ဆံရတာနဲ့ ကိုယ့်တာဝန်နဲ့ကိုယ် အားလုံးဝယ်နေကြပြီ ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သလောက် လုပ်ပေးပါ့မယ် အားလုံးမဖြစ်ရင်လည်းခွင့်လွတ်ပေးကြပါလို့
ကျွန်တော်ကလွဲရင် ကျန်တဲ့အမတွေက ဆိုင်တစ်ဖက် အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့သိပ်အားကြတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျ ရသလောက်အချိန်လေးကိုဖိုရမ်အတွက် လုလုပ်ပေးနေရတာပါ ဒါကြောင့်အားလုံးမလုပ်နိုင်ရင်ခွင့်လွတ်ပေးကြလို့ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ကျွန်တော်အတွက်က ဘဏ်ကနေဆိုရင်ပိုအဆင်ပြေမယ်နဲ့တူပါတယ်။ နေညှိုဆီကို pm နဲ့ထပ်ဆက်သွယ်ပါမယ် :)
တကယ်ပဲ အလှူနေ့မှာရှိချင်တာပါ ခုတော့ ဘာမှသိပ်မလုပ်ပေးလိုက်ရသလိုပါပဲ ဟိန်းလေးတကယ်ငိုချင်ပါတယ်
ဟိန်းလေးကို အစစအရာရာအားလုံးလိုလေသေးမရှိအောင် ကူညီပေးကြတဲ့မမခိုင် မနေညို ကိုေ၀၀ါး မမိုးပြေး အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်
၁-၁-၂၀၁၀ နှစ်သစ်မှာ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်ရဲ့ ပထမဆုံးပြုလုပ်တဲ့ အလှူပွဲကြီးအထမြောက်အောင် မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်း.....................
ဟိန်းလေး ပြန်သွားရတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။ လူအင်အားနည်းသွားပြီ။
(1.1.2010) နေ့ မနက် ( 9:00) နာရီမှာ မောင်လေးေ၀၀ါး အိမ်ကနေ တချိူ့ စုပြီးသွားပါမယ်။
မြို့ထဲက မန်ဘာများ အဆင်ပြေရင်လည်း ကိုယ်တိုင်သွားနိုင်သလို နေညို တို့နဲ့ အတူ သွားရင်လည်း
ရပါတယ်။ သုခရိပ်မြုံကို မခိုင် ကတော့ တန်းသွားပါမယ်။ အလှူပစ္စည်း အချို့နဲ့ပါ။
နေညို နဲ့ေ၀၀ါး ကတော့ေ၀၀ါး အိမ်မှာ ဆုံပြီးသွားပါမယ်။ နေညို တို့နဲ့ အတူသွားမဲ့
မန်ဘာများလည်းရှိပါတယ်။ေ၀၀ါး ဆိုင်ကတော့
မော်တင်ကားဂိတ်အနီး ၊ မဟာဗန္ဒုလ လမ်း ပါ။
လာခဲ့ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ။ အားလုံးပျော်ပျော်ပါးပါးသွားကြတာပေါ့။
ဆိုင်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ ၂၂၈၀၈၀ ပါ။
ေ၀၀ါးရေ..အမတော့ ဆိုင်ကိုပါ ညွန်းလိုက်ပြန်ပြီနော်။ :4: :4:
၁ ရက်နေ့ကသောကြာနေ့ဆိုတော့ လိုက်လို့ရမှာဟုတ်တော့ဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီနေ့ပဲ ခွင့် ၁၀ ယူပြီးအိမ်ကိုပြန်ထားတာဆိုတော့ နောက်ထပ် ထပ်ယူရင်အဆင်မပြေဖြစ်နေလို့ .... အဲဒီအတွက်လဲတစ်ကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူး....
ဟုတ်ကဲ့ပါအမရေ ကျွန်တော်ကိုဖိုရမ်က ကောင်မလေးတွေမသိသေးတာဆိုလို့ သန်ခေါင်စာရင်းပဲကျန်တော့တယ်နော် :( အကုန်သိကုန်ပြီ ဓာတ်ပုံလေးပါတင်ပေးလိုက်ပြီနော် ကိုကိုေ၀၀ါးဆိုတာဘူလေးလည်းဆိုပြီး လက်တို့ပြီးတော့လူတကာကိုလိုက်မေးမနေနဲ့ ဒီလင့် (http://www.myanmarengineer.org/index.php?ind=gallery&amp;op=foto_show&amp;ida=89) မှာသွားကြည့်လိုက်တော့နော် ဘူလေးလဲဆိုတာ မှတ်ချက်လေးတော့ပေးသွားဦးနော် :4: အမရေကျွန်တော်တော့လူပျိုကြီးဖြစ်ပါပြီနော် အမအချွန်နဲ့မတာနဲ့ အဲလိုရင်းတောင်မရောက်တော့ဘူး
1ရက်နေ့လိုက်မယ့်သူများကျွန်တော်နဲ့နီးရင် ကျွန်တော့်ဆိုင်ကိုလာခဲ့ကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူသွားမယ့်လူတွေခုဆိုရင်
ကျန်တဲ့လိုက်မယ့်သူများလည်း ဆက်သွယ်လိုက်ပါနော် ကျွန်တော့်ဆီကိုမရရင် အမKPZ ဆီကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ လူအင်အားလေးနဲနေတယ်နော် မန်ဘာတွေအများကြီးရှိတာကို :&#039;( ဟိန်းလေးရေ ခွင့်မရလို့ပြန်သွားရပေမယ့် ဓာတ်ပုံတွေတင်ပေးလိုက်မယ်နော် နောက်တစ်ခါဖိုရမ်2နှစ်ပြည့်ကျရင်တော့ လာရင်လာခဲ့လေ လိုက်မယ့်သူများကျွန်တော်တို့ဆီကိုဆက်သွယ်ပါနော် ကိုယ့်ဘာသာသွားရင် လမ်းမသိမှာစိုးလို့ပါ ဆရာလုပ်တာဟုတ်ဘူးနော် :haha: :haha:
တစ်လက်စတည်း promotion အစီအစဉ်လေးပါပါတယ်ခင်ဗျ ကျွန်တော့်ဆိုင်ကိုလာတဲ့သူများကို လက်ဘက်ရည်တိုက်ပါမယ်ခင်ဗျ ဟဲဟဲေ၀၀ါး တို့က ကြော်ငြာအားလည်းကောင်းတယ် လက်ဘက်ရည်တိုက်မယ့်အစီအစဉ်က လူဦးရေကန့်သတ်ထားလို့ အမြန်စာရင်းပေးထားမှစိတ်ချရမယ်နော် :2: :2: :2: ပထမဆုံးရောက်တဲ့သူကို အ၀စားခင်ဗျ (ဆိုင်ဝမှာ စားရမှာ :4: :4: မဟုတ်ဘူးနော်လို့ပြောမလို့ပါ ) အဲဒါကိုတော့ကျန်တဲ့သူတွေဘယ်သူမှစားရမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျ ကျွန်တော်ကဆိုင်ရှင်ဖြစ်နေတော့ ကျွန်တေ်ာပဲအရင်ဆုံးရောက်မှာမို့ပါ :haha: :haha: :haha:
အမKPZ နဲ့ အမမိုးပြေးတောင် ဒီအစီအစဉ်ပါတာသာသိရင် ကျွန်တော့်ဆီလာရင်လာမှာ:4: :4:
ကျွန်တော်တို့ အစပိုင်းမှာ အလှူငွေ ကောက်ဖို့ကို ၂၅ ရက်နေ့လို့ နောက်ဆုံးထားပေမယ့် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပေါ့နော်... နောက်ကျမှ အလှူငွေ လက်ခံရရှိတာလည်း ရှိပါတယ်..။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကုသိုလ်အရေးမို့.. စောသည် နောက်ကျသည်ကတော့ သတ်မှတ်လို့ မရဖူးလေနော်...
နောက်ထပ် အလှူငွေ လာရောက်ထည့်ဝင်သွားသူကတော့ yewin ဖြစ်ပြီး အလှူငွေကတော့ S$ 30 ပါ....
ယခုလို လှူဒါန်းရတဲ့ အကျိုးကြောင့် yewin တစ်ယောက် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာပြီး ကိုယ် ရည်မှန်းထားတဲ့ ပန်းတိုင်ကို လွယ်လင့်တကူ ရောက်ရှိနိုင်ပါစေလို့နော်... :)
ဒီနေ့အထိ လက်ခံရရှိသော အလှူငွေများစာရင်းဖြစ်ပါတယ် ။
ကျန်ခဲ့သည်များရှိရင် အသိပေးစေလိုပါတယ် ။
ယခုဆိုရင် ကိုထွန်းအောင်ကျော်+မအေးနုခင် တို့မှ အလှုငွေ 2သောင်းကျပ်ကိုလက်ခံရရှိပါတယ်
နောက်ထပ် အလှုရှင်ကတော့ 6.1.2010 နေ့တွင်ကျရောက်သော မမီးလေး (ခေတ္တ- စင်္ကာပူ) မှမွေးနေ့အလှုအဖြစ် 3သောင်းကျပ်ကို လက်ခံရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ
ခုလိုလှုဒါန်းရသော အလှုရှင်များစိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်း နဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုအလွယ်တကူလျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ အလှုရေစက်လက်နဲ့မကွာလှုနိုင်တန်းနိုင်ကြပါစေလို့ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ဝင်များကိုယ်စား
ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ယခုစုစုပေါင်းအလှုငွေ5သောင်းကို အမKPZ ဆီကိုလွဲပေးလိုက်ပါပြီခင်ဗျာ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
HAPPY NEW YEAR ALL DEAR MEF MEMBER
နှစ်သစ်ကိုစိတ်လက်ပေါ့ပါးစွားကြိုဆိုနိုင်ကြပါစေဗျာ ခုဆိုဖိုရမ်အလှုစာရင်းပိတ်ပါပြီခင်ဗျာ ခုလိုတက်တက်ကြွကြွပါဝင်လှုဒါန်းကြသော အလှုရှင်များကိုလည်း အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ခုလိုအလှုတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ငွေအင်အားတတ်နိုင်တိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ လူအင်အား ငွေအင်းအား အလှုခံပုဂိုလ် လှုဒါန်းမည့်ပစ္စည်း လှုဒါန်းသူရဲ့စိတ် ဒီ၅မျိုးပြည့်စုံမှသာအလှုတစ်ခုကအောင်အောင်မြင်မြင်ဖြစ်တာပါခင်ဗျာ ဒီ၅မျိုးထဲကတစ်ခုခုလိုအပ်ရင်လည်းဖြစ်မြောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နဲ့ကိုယ်တိုင်လိုက်မလှုနိုင်ကြသောမန်ဘာအပေါင်းအတွက် ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်ဆန္ဒပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တေ်ာတို့မနက်ဖြန် ၁၁ နာရီမှာအလှုလုပ်ပါမယ်ခင်ဗျာ ဒါကြောင့်
အလှုလှုမယ့်အချိန်လေးမှာ တစ်မိနစ်ပဲရရ ပါ မိမိတို့အလှုအပေါ်အာရုံလေးပြုပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ခုဆိုရင် ကျန်တဲ့၎မျိုးကပြည့်စုံနေပါပြီခင်ဗျာ ဒီတစ်ခုပဲကျန်ပါတော့တယ် ခုလိုမျိုးအဘက်ဘက်ကငွေအင်အား လူအင်အားပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြသူတွေကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ အလှုကြီးစဖြစ်သွားအောင်ဦးဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ ကျွန်တေ်ာတို့ရဲ့အမကြီးကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ အားလုံးလည်းဒီနေ့မရှိကြဘူးနော် ဒီစာလေးတောင်ဖတ်မိပါ့မလားမသိဘူး new year ကိုကြိုဆိုနေကြတော့ ကျွန်တေ်ာကတော့new year ကိုရေမချိုး ထမင်းမစားရသေးပဲကြိုဆိုရတော့မယ်ထင်ပါရဲ့နော် ဘ၀ကတစ်ခါတစ်လေခါးချင်တာမခါးရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ (ရေခဲမှမရောမိတာကိုးနော်)ေ၀၀ါးတို့များ ခါးချင်တာတောင်ခါးခွင့်မရဘူးဗျာ ဘ၀ကအမြဲချိုမြိန်နေတယ် :4: ရေရောခွင့်မရခဲ့တဲ့ 2009 ခုနှစ်ရဲ့ဒီဇင်ဘာ31ပေါ့ဗျာ ဖိုရမ်ကလူတွေလည်းသိပ်မကဲချင်ကြဘူးနဲ့တူတယ်နော် အားလုံးကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက်ပဲ အားလုံးကဲနိုင်ကြပါစေဗျာ
အပြတ်ကဲမယ်အစီအစဉ်တွေဆွဲပြီးကာမှ ခါးသီးခွင့်ကိုမရလိုက်ဘူးဗျို့ :4: :4: အော်ေ၀၀ါးကို မကောင်းမှုတွေမလုပ်ဖြစ်အောင် တားဆီးလိုက်တာထင်တယ်နော် ဖိုရမ်ကလူတွေရဲ့မေတ္တာနဲ့စုပေါင်းအလှုပွဲကြီးမနက်ဖြန်ဆိုစပါတော့မယ်ခင်ဗျာ အာရုံလေးပြုနေကြပါနော် မကောင်းမှုတွေလုပ်ခွင့်မကြုံတော့ ကောင်းမှုတွေပဲဆက်တိုက်လုပ်တော့မယ်ဗျို့ တရားနာရင်းနှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာ မနက်ဖြန်တော့မိမိတို့အလှုအပေါ်အာရုံလေးပြုနေကြပါနော်
အလှူဖြစ်မြောက်အောင်အဘက်ဘက်က စိတ်အားထက်သန်စွာ ဝိုင်းဝန်းကူညီ ပံ့ပိုး ကြတဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများကို အထူးဘဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
MEF မှညီအစ်ကိုမောင်နှမများ နှင့် အမိမြေမှညီအစ်ကိုမောင်နှမများ နှစ်သစ်အစမှစ၍ သာယာချမ်းမြေ့ပြီး လိုရာဆန္ဒတွေအားလုံး ပြည့်စုံကြပါစေ လို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
MEF Forum ကိုစတင်ထူထောင်ခဲ့တဲ့ &quot;ကိုမောင်ဆန်း နှင့် ကိုရေခါး&quot; MEF မှတာဝန်ရှိသူများအားလုံးကိုလဲ မျိုးဆက်သစ်များကိုယ်စား
Myanmar Engineer Forum နှစ်ပေါင်းများစွာတည်တံ့ပါစေ ...
အလှူပွဲကို ဖိုရမ်ကနေ မျှော်နေရတာ မောလှပြီနော်..အားလုံးအဆင်ပြေ ချောမွေ့မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်..အဲဒီလိုဖြစ်ပါစေလို့လဲ ဆုတောင်းနေပါတယ်..လိုက်ပါကူညီဖို့မလွယ်ကူခဲ့ပေမယ့် တူတူလိုက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပဲ သဘောထားပေးပါ ညီအစ်ကိုတို့ရေ..မနေညို၊ မKPZ၊ ညီလေးေ၀၀ါး တို့ရေ ကျွန်တော်မျှော်နေပြီနော်..ပြန်ရောက်တာနဲ့ အခြေအနေလေးတွေ အသေးစိတ်လေးပြန်ပြောပြကြနော်..ပြန်ဖတ်ပြီး ကြည်နူးချင်လို့ပါ..ပုံလေးတွေလဲ ရိုက်လို့ရလာသမျှ တင်ပေးကြနော်..အားလုံးကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်နေပါတယ်..ကျွန်တော့်လို မျှော်နေမယ့်သူတစ်ယောက်ရှိမယ်ထင်တယ်.သားသားက ကလေးဆိုတော့ ခံစားချက်ကို ဖွင့်ထုတ်တယ်..သူက လူကြီးဆိုတော့ အိနြေ္ဒကြီးနဲ့ မျှော်နေတယ်(ဟီးဟီး ကိုချစ်သီးလို့မပြောဘူးနော်)..အလှူရက်လေးမို့ ပျော်နေလို့ နောက်တာနော်. :4:
ဟုတ်ကဲ့ပါခုဆိုအလှုပြီးပြီးချင်းပဲပို့စ်လာရေးတာပါ အမKPZက ပို့စ်တင်ပေးပါလိမ့်မယ် အားလုံးအမရဲ့ပို့စ်ကိုမျှော်လင့်နေကြပါနော် ဓာတ်ပုံတွေလည်းတင်ပေးလိုက်ပါလိမ့်မယ် ကျွန်တေ်ာက အလှုရှင်တစ်ယောက်အတွက်လာရေးပေးတာပါ ဒီနေ့အလှုကိုလိုက်ဖြစ်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်ခင်ဗျာ ကိုကျော်ကျော်အောင်ကလည်း အလှုငွေ1သောင်းကျပ်လှုဒါန်းပါတယ်ခင်ဗျာ
ခုလိုလှုဒါန်းရသောအကျိုးကြောင့် ကိုကျော်ကျော်အောင်တစ်ယောက် ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့် ဘ၀ခရီးလမ်းကိုအခက်အခဲမရှိလျှောက်လှမ်နိင်ပါစေဗျာ ဒီနေ့ကျွန်တေ်ာတို့တွေနဲ့လိုက်တဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီနေ့ပွဲအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပါပြီခင်ဗျာ ဒီနေ့အလှုပွဲဖြစ်မြောက်အောင်အစစအရာရာစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သော အမKPZ ကိုလည်းအထုးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ အလှုနေ့မှာခွင့်ယူပြီးလိုက်ပေးကြသော
ကိုကျော်ကျော်အောင် တို့ကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်နော် ကျွန်တေ်ာ့ဘက်ကဆိုင်မှာ ပျက်ကွက်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ် ကျွန်တေ်ာလည်းအလုပ်မအားလွန်းလို့ပါ အမနေညိုတို့ဆိုရင် ဆိုင်မှာပိုက်ဆံပေးစားသွားရတယ်တဲ့ ဆော်ရီးအမနေညိုရေ ကျွန်တေ်ာတကယ်ဧည့်ဝတ်မကျေခဲ့တွက်အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တေ်ာ့ဘက်ကတာဝန်မကျေခဲ့တာတွေအတွက် တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ
အမKPZ ကနေအလှုမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံတွေကိုတင်ပေးပါလိမ့်မယ့် အဲဒီကျမှ တ၀ကြီးကြည့်ကြပေတော့နော် ပြီးတော့ဖိုရမ်က ဖိုရမ်ကိုရီးယားမင်းသားများနဲ့ ဖိုရမ်ကိုရီးယားမိခင်သရုပ်ဆောင်နှစ်ယောက်အတူတူဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာကိုလည်း တ၀ကြီးကြည့်ရမှာပါခင်ဗျ :4: :4: (ဟဲဟဲ တားပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် အမKPZ နဲ့ အမနေညို )
အားလုံးကို ကျေးဇူးပါ ။ ကိုကျော်ကျော်အောင်က ကျနော် classmate ၊ အကိုမဟုတ်ပါဘူး ။ သူက ဒီဖိုရမ်မှာတော့ register မ၀င်ထားသေးဘူးဗျ ။
အလျှုငွေ နောက်ကျသွားတာကလဲ နယူးရီးယား ညမှ ကျနော် ပြောလိုက်လို. အလျှုမှာပါဝင်ဖြစ်တာပါ ။
ပြီးတော့ special thanks အနေနဲ. နေ.လည်စာအ၀ကျွေးတဲ့ အမ KPZ နဲ. လက်ဘက်ရည်တိုက်တဲ့ ကိုေ၀၀ါး ပါ :P ။
အမ KPZ လဲ ပွဲတွေဆက်နေတယ်ဗျ ။ သူက ငွေဆောင် သွားဦးမယ်လို.ပြောတယ်လေ ။ အကိုဒေါက်တာဖြိုးဝေလင်း လဲ... ဓါတ်ပုံရိုက်သွားသေးတယ်လေ ။ ဓါတ်ပုံတွေကတော့ စောင့်ရဦးမယ်ထင်တယ် ... ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် မောင်နှမတွေ ဒီထက်ပိုပြီး ခင်ခင်မင်မင်နဲ. နောက်ထပ် activities တွေ ဆောင်ရွက်နိင်ပါစေ ။
အလုပ်အကိုင်တွေ အဆင်ပြေပြီး အောင်မြင်ကြပါစေလို. ဆုတောင်းပေးပါတယ် ။
တစ်ခုတော့တောင်းပန်ထားပါရစေနော် အမKPZက 9ရက်နေ့မှပြန်မှာပါ ဒါကြောင့်သူဟိုကိုရောက်ရောက်ခြင်းတင်ပေးမှာပါ ခုကတော့အမလည်းအိမ်အတွက်အချိန်ပေးရဦးမှာမို့ပါ မဟုတ်ရင်လည်း အမ အိမ်ကနေကန်ချခံရလိမ့်မယ်ခင်ဗျ :4: :4: ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကနေပုံတွေတင်မယ်ဆိုရင်လည်း ခုတစ်လောကော်လည်းသိပ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျ အမလည်းသိပ်မအားတော့ 9ရက်နေ့နောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့သေချာပါပြီခင်ဗျာ ဒါကြောင့်နဲနဲလေးတော့သည်းခံပြီးစောင့်ပေးကြပါလို့တောင်းပန်ပါတယ်နော် ကျွန်တော်တို့အလှုပစ္စည်းတွေ အလှုလိုက်တဲ့ဖိုရမ်မန်ဘာတွေရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကိုတ၀ကြီးခံစားရတော့မှာပါ ကုသိုလ်ပွားလို့ရတာပေါ့ခင်ဗျာ ခဏလေးတော့သည်းခံပါနော် :4: :4:
ကျွန်တော်လဲ ဖိုရမ်က ညီအကိုမောင်နှမ တွေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါးကြီး အလှူပွဲလုပ်ရတာက ဘ၀အတွက် အမှတ်တရတစ်ခုလိုကျန်ခဲ့မှာပါ..
ပြီးတော့ ဖိုရမ်အတွက် အခုလို ကူညီခွင့်ရတာ တကယ်ကိုကြည်နူးဝမ်းသာစရာပါ.. နေ့လည်စာ အ၀( ကိုေ၀၀ါးရယ် ၊poohကလေး၊မမနေညိုရယ်)
စားလိုက်တာ လိုက်ပွဲ2ပွဲ ပြောင်ရောပဲ တခြားလူတွေတော့ ပြောတော့ဘူးနော်)ကျွေးတဲ့ မမကေပီဇက် ကိုလဲ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါသည်...
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ နောက်ထပ်ဖိုရမ်မှ မောင်နှမ များနဲ့ အခုလို ခင်ခင်မင်မင်နဲ့ activities များကို ဆောင်ရွက်ခွင့်ရပါစေလို့ ဆုတောင်းနေရင်း
ဖိုရမ်မှ မောင်နှမ များကို ခင်မင်သော
ကျနော် လဲ ဗျာ .. ၃၁ ရက်နေ့ လခထုတ်ပြီးမှ လာထည့်ဖို့ ဟာ (အဲဒါလေးကို မျှော်ကိုးနေရတာဗျ ..ဟီးဟီး :4: :4:) .. အဲဒီနေ့ ဂျူတီ ကျနေတာဗျာ ။ မနေ့ က ရန်ကုန် ကိုတော့ တက်လာတာပဲ ... ကိုဇင်မောင်ထွန်း နဲ့ ကိုေ၀၀ါး ကို လှမ်းမေးလိုက်တော့ ပြီးသွားပြီ ၊ ပြန်တောင်လာပြီတဲ့ဗျာ ...။ :angry: :&#039;( :&#039;(
ကျနော်လည်း ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ပါတ်၃ပါတ် မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေပေမယ့် ရန်ကုန်မှာမဟုတ်တော့ online မသုံးဖြစ်ဘူးဗျ.
အခြေအနေပေးရင် တစ်နှစ် တစ်ခေါက်လောက် လှူဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြတာပေါ့ဗျာ
အားလုံးပဲ Happy New Year ပါ။
အလှူပွဲလေးက အောင်မြင်စွာ ၊ ပျော်ရွှင်စွာ ပြီးစီး သွားပါပြီ။
လိုက်ပါပေးတဲ့ မောင်လေးများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လှူဒါန်းကြသောမန်ဘာများနှင့်
ဖိုရမ်မှ မန်ဘာများအားလုံး ၊ ပိုစ့်တွေရေးပြီး အားပေးသော မန်ဘာများ အားလုံး အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံတွေက မခိုင် ကင်မရာနဲ့ ဒေါက်တာ ကင်မရာ နဲ့ ရိုက်တာဆိုတော့ သူတို့တင်ပေးမှ အဆင်ပြေမှာပါ။
အားလုံးကလည်းအလုပ်ရှုပ်နေကြလို့ပါ။ ဓါတ်ပုံချက်ချင်းမတင်ပေးနိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့။
နေညို တို့ အလှူငွေကိုလည်း မူလ သတ်မှတ်ထားတဲ့ (500,000-/) အပြင် အများကြီးတိုးပြီးလှူနိုင်ပါတယ်။
အလှူရှင်တွေကလည်း ပေါ်လာတော့ နေညို တို့ ဝေေ၀ဆာဆာလေး လှူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွာတွေကိုလည်း တင်ပေးမှာပါ။ ဓါတ်ပုံတွေတော်တော်များများ ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ နေညို တို့ပုံပဲများမယ်ထင်တယ်။ ဆရာမကြီးက အနီးကပ်မရိုက်ဖို့ တောင်းပန်တာကြောင့် နေညိုတို့လည်းအားနာပါတယ်။
ကလေးတွေအားလုံးက သန့်သန့်ရှင်းရှင်းလေးတွေနဲ့ ချစ်စရာလေးတွေပါ။
နေညိုတို့ကို လည်း ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ဆက်ဆံပါတယ်။ လူနားအရမ်းကပ်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံတွေရမှာပဲ အားရပါးရ ခံစားကြပါလို့။
ဟေ့ အကျင့်ပုတ်တယ်ကွ...ကြေငြာပြီး..အမြည်းလေးတစ်ပုံ ၂ ပုံလောက်တောင်မတင်ဘူး..
ချိတ်ချိုးတယ်.. :angry:....အပျိုကြီးဖြစ်တော့မှာပဲ...အွန်စောတို့တော့.. :2:
လူပျိုကြီးတွေ့တော့ မဖြစ်ဘူးလား........... :2: :2: :2: :2: :2: :2: :2: :2:
ကို pargyi ကြီးတို့ကတော့လုပ်ပြီ ဒီနေ့ပဲ3ရက်ရှိနေပြီလေ အမခိုင်ကခုဆိုရေသူမဖြစ်နေလောက်ပြီဗျ
ကိုချင်းတွင်းသားရေ ငှက်ပျောတုံးဆောင်ထားမယ်ဗျို့ :haha: :haha: :haha: နည်းနည်းလောက်သည်းခံစောင့်ပေးကြပါနော် ကင်မရာက အမKPZရယ် ဒေါက်တာရယ်ဆီမှာပဲပါလာတာဗျ
ခုကိုကိုဒေါက်တာက တောခိုသွားပြီ :4: ဘယ်ပျောက်လို့ပျောက်မှန်းကိုမသိတော့ဘူးဗျို့ မKPZ 9ရက်နေ့ပြန်လာမှာကို နဲနဲလောက်သည်းခံလိုက်ကြတာမဟုတ်ဘူး တကယ်ပဲ &gt;:( &gt;:(
အမKPZရေ ပြန်ရောက်ရင် အမြန်သာတင်ပေးလိုက်တော့ဗျို့ ကျွန်တေ်ာ့ပုံကိုကြည့်ချင်လွန်းလို့ တောင်းဆိုနေကြတယ်ေ၀၀ါးက ကိုရီးယားမင်းသားမဟုတ်ပါဘူး ဒီလောက်မကြည့်ချင်ကြပါနဲ့ ကောင်မလေးတွေကြည့်ဖို့ထားကြပါဦး :2: :2:
အပျိူကြီးမဖြစ်အောင် အလှူငွေတွေထည့် ၊ စိတ်ရောကိုယ်ရော လုပ်အားပေးထားတယ်လေ။ ငှဲ ငှဲ :P :P
မနေညို တို့ ကစလို့ မြန်မာပြည်က ၀န်ထမ်းအားလုံး
ကိုယ်ပြုတဲ့ ကုသိုလ် ချက်ချင်းအကြိုးပေးတယ်နော
၀န်ထမ်း အားလုံး လစာ တိုးမယ်ဆိုပဲ
လစာကတော့ တိုးမတိုးတော့ မသိဘူး..
မီတာခက နှစ်ဆ တက်မယ်တဲ့..
ကုန်ဈေးနှုန်းကလည်း တက်ဖို့ အဆင်သင့်စောင့်နေတယ်ဗျ.
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လစာတိုးတယ်ဆိုတော့ ကောင်းပါတယ်နော်...
လစာ ကတော့ အားလုံးတပြေးညီ နည်းနည်းပဲတိုးတာပါ။
ဒါပေမဲ့ အခုတော့ သေချာတာက ဖုန်းကြေးကတော့ ၂ ဆတိုးပြီလေ။
အလှူပွဲကတော့ မစခင်ကတည်းက ပြောနေဆိုနေလိုက်ကျတာ အင်မတန် ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ အလှူရက်နီးလာတော့လဲ ချိန်းကြ လွဲကြနဲ့ ပို့ဖတ်ရတဲ့သူတွေမှာ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ပါ။ အလှူ အောင်အောင်မြင်မြင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝမ်းသာပီတိ ဟာ ပြောမပြတတ်အောင်ပါပဲ။
ကျမတို့ ဖိုရွမ်ရဲ့ ပထမအကြိမ်အလှူပွဲဟာ အလှူမစခင်၊ အလှူကျင်းပစဉ်နဲ့၊ အလှူပြီးသွားသည့် တိုင်အောင် စေတနာသဒါ ထက်သန်ပြီး တက်ကြွတဲ့ အသင်းဝင်တွေရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်နဲ့ အောင်အောင်မြင်မြင် ပြီးစီးသွားပါပြီ။ ဒါဟာ MEF ရဲ့ အမှတ်တရ လှုပ်ရှားမှု တစ်ခုပါပဲ။ အလှူတုံးက အမှတ်တရလုပ်ရှားမှူတွေ အတွက် ပို့ရေးတဲ့အခါ ဓတ်ပုံတွေနဲ့ အတူ MEF အမှတ်တရ လှုပ်ရှားမှုများ ဆိုတဲ့လင့် မှာတင်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါရစေ။
MEF အမှတ်တရ လှုပ်ရှားမှုများ ---&gt;&gt;&gt; http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/board,248.0.html
ကဲအားလုံးမျှော်လင့်နေတဲ့ပုံတွေလာပါတော့မယ်နော် အခုရက်အတွင်းဒီကဏ္ဍလေးကိုဝင်ဝင်ကြည့်ကြနော် အမKPZ ကတင်ပေးပါလိမ့်မယ် မနက်ဖြန်ကနေစပြီးသာဝင်ကြည့်ကြပေတော့နော် အရင်ဆုံးကြည့်ခွင့်ရတဲ့သူကိုဆုပေးမယ်နော် :4: :4: အမKPZတို့ကတော့ကွာ လူကမရောက်သေးဘူး နာမည်ကကြီးနေပြီနော် စာလုံးကြီးနဲ့ရေးထားလို့ :2: :2:
အကိုဝေဝါးရေ အမကေပီဇက် ကို အကို ပြောသလိုဆို ကျွန်တော် ရေးသလိုပေါ့ .....
အမခရီးသွားပြီးမောမောနဲ့ပြန် လာရင်သောက်ဖို့ vanilla milkshake လေးပါ .........
အမ KPZ အမောပြေသောက်ရန်......https://www.khanapakana.com/drink-recipes/images/vanilla-milkshake.jpg
ဒီနှစ်က ကျောင်းတတ်ရမှာဆိုတော့ အမ ကေပီဇက် ကို အပီဖားထားမှ ပြီးရင် ဓါတ်ပုံသွားရိုက် လိုက်မယ်........... :D :D :D :D :D
နာမည်ကြီးကြီးရေးထားပေးတယ်နော် အမကေပီဇက်ရေ အမ နာမည် ကြီးအောင်လို့
အမောပြေ vanilla milkshake လာသောက်သွားတယ်နော်
အမပို့ရော ဓါတ်ပုံရေ တင်ထားပီးပီ ကျေနပ်တော့နော်
အလှူပွဲလေး ကအောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးသွားပေမဲ့ သဒ္ဒါတရားထက်သန်တဲ့ တို့ဖိုရမ်မောင်နှမများထဲမှ
ကိုအောင်ခိုင်ဦး က အလှူငွေ ကျပ် နှစ်သောင်းတိတိ ကိုဘဏ်ကနေတဆင့် လွဲပြီး လှူဒါန်းပါတယ်။
အလှူငွေတွေကို နေညိုတို့ အနေနဲ့ စုဆောင်းထားပြီး အဆင်ပြေသလို လှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
အလှူငွေများ ကို အဆင်ပြေသလို ထည့်ဝင်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ် အလှူပွဲများအတွက်လည်း အကြံဥာဏ်များကို ပေးကြပါဦးလို့။
တကူးတက လှူဒါန်းပေးပါသော ကိုအောင်ခိုင်ဦး ကို အထူးတလည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
လှူဒါန်းရသော အကျိုးများလည်း ပြည်ှုဝပါစေရှင်။